ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း သို့ထပ်ဆင့်တုံ့ ပြန်ချက်
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ကျနော့်ကို စတင်ထိုးနှက်ရေးသားလာတဲ့အတွက်၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းနဲ့ စကားမပြောချင် အငြင်းအခုန်မလုပ်ချင်တဲ့ကြားထဲကနေ၊ မလွဲမကင်းသာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနဲ့ပဲ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ‘ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းသို့တုံ့ ပြန်ချက်’ကို ပြန် လည်ရေးသား ရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီးပါ ပြီ၊၊ ဒါလောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့လဲ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်၊၊ ဟို လူနဲ့ ပြဿနာဖေါ်လိုက်၊ ဒီလူနဲ့ ပြဿနာဖန်တီးလိုက်-ဖြစ်နေတဲ့ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပကတိရုပ်ပုံမှန်ကို အတိုင်းသားမြင်မိ တွေ့မိနေလို့ပါပဲ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေတ်က ဘာလို့အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကြသလဲ-ဆိုတာကိုပြောသလိုလိုနဲ့ အဖေဖြစ်သူ ဦးကျော်ငြိမ်းကို အရောင်တင်ပေါလစ်တိုက်ပေးရင်း၊ ကျနော့်ကိုပါလှမ်းပြီး ထိကပါးရိကပါး ထိုးနှက် လာခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်၊၊ အဲဒီ သူ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိလိုက်သူတွေလဲ သိလိုက်ကြမှာပါ၊၊
ကျနော်က ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ပဲ၊ ဦးပေါ်ဦး လျှောက်ထုံးထဲကလို - ကျွန်းကို ပါစေချင်တဲ့ ဦးပေါ်ဦး က ‘ပိတောက်လဲကောင်းပါတယ် - ကျွန်းလဲကောင်းပါတယ်’၊ ‘ပျဉ်းကတိုးလဲ ကောင်းပါတယ်- ကျွန်းလဲ ကောင်းပါတယ်’ လို့ချည်း လျှောက်တင်နေတာကို အမှတ်ရချင်စရာပဲလို့ပြောခဲ့ပါ တယ်၊၊ တကယ်က ‘ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တော်ပါတယ်- ကျုပ်အဖေ ဦးကျော်ငြိမ်းလဲ တော်ပါတယ်’ ‘ဦးနုကြီးတို့ ဦးရာရှစ်တို့လဲ တော်ပါတယ်- ကျုပ်အဖေဦးကျော်ငြိမ်းလဲ တော်ပါတယ်’လို့ ပြောချင်နေတာကို အယဉ်ကျေးဆုံး ပမာခိုင်းပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ဖေါ်ထုတ် ပြောဆိုလာတဲ့၊ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ အချက်(၃)ချက်ကိုလဲ ကျနော့်ဖက်က ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်၊၊
ဟော အခုတခါ - ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ထပ်လုပ်လာပြန်ပါတယ်၊၊ ကျနော့်ရဲ့ တုံ့ ပြန်ချက်အပြီး တပတ်အကြာမှာပဲ၊ မဇ္ဈိမ ထဲမှာပဲ -‘ဦးကျော်ငြိမ်း နှင့် တိုင်း ၆ ’- တဲ့၊၊
ရွှေမန်းတင်မောင် ရဲ့ ပြဇာတ်၊ ဓါတ်ပြားတောင် သွင်းထားပြီး ကျနော်တို့တောသူတောင်သား ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုအများစုကြီးကြားမှာ နားရည်ကို တော်တော်ဝနေရတဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ ‘ရွဲကုန်သည် ဇာတ်’ ကို သတိရချင်စရာလို့ပဲပြောရဦးမှာပါပဲ၊၊ မတော်လောဘကြီးလှတဲ့ ‘ရွဲကုန် သည်’ ရဲ့“ မပေး ပေးပေး - ငါ့ ရွှေခွက်ပေး၊ မပေးပေးပေး- ငါ့ ရွှေခွက်ပေး ” ဆိုပြီး၊ ဟစ်ဟစ် ပြီး ငိုလိုက်ဆိုလိုက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖူးကြမှာပါ၊၊ အခုလဲ- ‘မပေး ပေးပေး-ငါ့ရွှေခွက်ပေး၊ မပေးပေးပေး- ငါ့ရွှေခွက်ပေး-’ ဆိုသလို၊ ‘ မသွား သွားသွား- တိုင်း ၆ နိုင်ငံရေး မှူး ’ ‘ မသွား သွားသွား-တိုင်း ၆ နိုင်ငံရေးမှူး ’ လို့ချည်း အတင်းကိုပြောဆိုနေတော့တာပါပဲ၊၊
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ‘အချက်အလက်-အချက်အလက်’ ဆိုတာကို တွင်တွင်ပြောပြီး၊ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက တိုင်း(၆) နိုင်ငံရေးမှူးဆိုတာကို အရှင်ရရအသေရရ ကျားပိန် တွယ် တွယ်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပြောနေတဲ့အချက်အလက်(facts) ဆိုတာက အစည်းအဝေးမှာ တိုင်းတာဝန်တွေခွဲကြစဉ်က သဘောတူစာရင်းပါ အချက်အလက် ကိုပဲ အချက်အလက်လို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဟုတ်ကဲ့-ကျနော်ကလဲ အချက်အလက်နဲ့ ပဲ အတိုချုပ်အဖြစ်နဲ့ရေးပါတယ်၊၊ ကျနော်ရေးတဲ့အချက်အလက်က အဖြစ်မှန်အချက်အလက် (တကယ့်အမှန်တကယ် လက်တွေ့အချက်အလက်)နဲ့ပဲ သမိုင်းမှန်အဖြစ်ရေးပါတယ်၊၊ဦးကျော် ငြိမ်းဟာ ဘယ်တိုင်းမှကိုသွားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ဘယ်တိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ်နဲ့မှ မဖေါ်ပြ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဒါ တကယ့်သမိုင်းမှန် လက်တွေ့အချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်၊၊
လက်တွေ့အရ- တိုင်း(၆)နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ်က ဦးကျော်ငြိမ်း မသွားတဲ့အတွက်၊ တိုင်း (၆) နိုင်ငံ ရေးမှူးအဖြစ် ဖြစ်သွားရတာက-သခင်တင်ထွန်း(ကွန်မြူနစ်) ဖြစ်သွားရပါတယ်၊၊ ဒါဖြင့် - ဦးဗ ဆွေနဲ့ဦးကျော်ငြိမ်းကို ဘာလို့ရန်ကုန်တာဝန်ခံလို့ရေးရတာလဲ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော ကလဲ ပြောင်းပြီး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ ရေးသားချက်တွေကို အလေးထားပြီး ကိုးကားရေးသားခဲ့တဲ့ ကျနော်(ဝင်းတင့်ထွန်း)ကလဲ မလိုတမာပြောင်ပြီး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောက သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္တုပ္ပတ္တိ စာမျက်နှာ (၈ဝ) မှာ- မှတ်ချက်(၂) ဆို တာမှာ ရေးထားတာက “ တိုင်း (၆) တာဝန်ကျသော ဦးကျော်ငြိမ်းကို တိုင်း(၆)သို့ မပို့တော့ပဲ ရန်ကုန်တွင် ကိုဗဆွေ နဲ့ တွဲဘက်တာဝန်ပေးသည်”လို့ ရေးပါတယ်၊၊ အဲဒါကို ( သခင်တင်မြ ၏ တိုင်းကြီး ၁ဝတိုင်း၊ နှာ ၄၄ ) လို့လဲ ဖေါ်ပြပါတယ်၊၊ အဲဒီတော့ သခင်တင်မြရဲ့ တိုင်းကြီး (၁ဝ) တိုင်းကို အင်မတန်မှ ဖတ်ထားသယောင် ပြောဆိုနေတဲ့ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းပဲ ပြန်ရှာပြန်ဖတ် ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊၊ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်စာအုပ်ပြုစုရေးသားစဉ်က အဲဒီစာအုပ်ကို ကိုး ကားခဲ့ခြင်းမရှိတော့၊ ရိုးရိုးသားသားပဲ အဲဒီသခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီး(၁ဝ)တိုင်းကို မကိုးကားခဲ့ပါ လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊၊ ကျနော့်ရဲ့ ကိုးကားစာအုပ်စာရင်းမှာလဲ ထည့်ထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ၊၊ မကိုးကား ခဲ့တာကို မကိုးကားခဲ့ဘူး-ပြောတာဟာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ဆွဲချပြော ကောက်ချက်ချသလို-ကိုယ့် ဟာကိုယ် ဆင်ဆာလုပ်ခဲ့တာလဲမဟုတ်ပါ၊၊ ကျနော် သခင်တင်မြကို နိုင်ငံရေးအရ မကြိုက်ပေ မဲ့၊သခင်တင်မြ ရေးတာတွေကိုလဲ၊ ကျနော် အဆင်ပြေသလို ဖတ်တာ ရှိပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော် ငြိမ်းပဲ အတွင်းသိဖြစ်လို့သခင်တင်မြရဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ရမယ်လို့ ပြောနေတော့၊ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါဦး၊၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော ရဲ့ မှတ်ချက် (၂)ဆိုတာဟာလဲ၊ အဲဒီသခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီး (၁ဝ)တိုင်းထဲက အောက်ခြေမှတ်စု (၂)နဲ့ အတူတူပါပဲ၊၊ သခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီး(၁ဝ)တိုင်း အောက်ခြေမှတ်စု (၂) မှာက- ‘တိုင်း ၆ တွင်တာဝန်ကျသောဦးကျော်ငြိမ်းကို တိုင်း(၆) သို့မပို့တော့ဘဲ ရန်ကုန်တွင် ကိုဗဆွေနှင့်တွဲဖက်တာဝန်ပေးသည်၊၊ တိုင်း၆ နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ် သခင် တင်ထွန်း ( ယခုတောခို ကွန်မြူနစ်)ကို တာဝန်ပေးသည်၊၊ (စာရေးသူ)- တဲ့၊၊ အဲဒါ - သခင်တင် မြရဲ့“ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဌာနချုပ် နှင့် တိုင်း(၁ဝ)တိုင်း” စာအုပ် စာမျက်နှာ (၆၂) မှာ ရေး ထားတာတွေ့ရပါတယ်၊၊ ကျနော့်ဆီက စာအုပ်ကတော့- ကျုံ ပျော်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်တဲ့၊ ‘၂၃ကြိမ်မြောက်ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အတွက် ’ဆိုပြီး ထုတ်တဲ့ ၁၉၆၈၊ ဇူလိုင်-သြ၈ုတ်လ ဒုတိယအကြိမ် အုပ်ရေ (၃ဝဝဝ) ထုတ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော ယူတာက ဘယ်အကြိမ်ထုတ်လဲမသိပါ၊၊ ဒါကြောင့်-အဲဒီအချက်ပါ စာမျက်နှာနံပတ်တော့ ကွဲနေတာတွေ့ရပါမယ်၊၊ အဲဒီမှာ-( ဦးဗဆွေက ရန်ကုန်တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ) လို့ဖေါ်ပြထားလေ တော့၊ ဦးဗဆွေနဲ့ တွဲဖက်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းကို - ကျနော်က ‘ရန်ကုန်တာဝန်ခံ’ လို့ ဖေါ်ပြကာ ‘ဦးဗဆွေနဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းက ရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်’ လို့ရေးတာဟာ ဘယ် မှာမှားပါသလဲ၊ဦးဗဆွေက ရန်ကုန်တာဝန်ခံ - ဦးကျော်ငြိမ်းက ရန်ကုန်တွဲဖက်တာဝန်ခံလို့ဖေါ် ပြပေးရမှာလား၊၊ ကျနော် မလိုတမာစိတ်နဲ့ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပဲ၊ သမိုင်းအမှန်အတိုင်း၊သမိုင်း လက်တွေ့ အချက်အလက်အစစ်အမှန်အတိုင်း ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊၊ သမိုင်းကိုရေးကြ တဲ့အခါမှာစာရင်းပါ အထောက်အထားထက်၊ လက်တွေ့အစစ်အမှန်အထောက်အထားကိုပါ ကြည့်ရှူ့ပြီး စိစစ်ဝေဖန်မှုပါပါအမြင်နဲ့ ရေးသားနိုင်ရေးဟာအင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်၊၊ ဘို ဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ အဖေ- ဦးကျော်ငြိမ်းကိုယ်တိုင် ဝိဓူရသခင်ချစ်မောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောဒီလို ရေးသားခဲ့တာတောင် ရှိတယ်မဟုတ်လား၊၊
“(အမျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ) အတ္တုပ္ပတ္တိစာအုပ် စာမျက်နှာ (၃၁၄) တွင် ထိုခေတ်သာယာဝတီခရိုင် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တွင် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်ဟု ဝိဓူရသခင်ချစ်မောင်က ရေးသားထားသော်လည်း၊ ထိုတော်လှန်ရေးအချိန်၌ သူ့ကိုမတွေ့ရပါ၊၊ သူ ပါသည်ဟုလည်းမကြားဖူးပါ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအသိဖြစ်သည်၊၊ (ဤအချက်ကို ဖေါ်ပြသည် မှာ သမိုင်းမှန်အတိုင်းဖြစ်စေလို၍ဖြစ်သည်၊၊ အာဃာတ ရှိ၍မဟုတ်ပါ၊၊ ) တဲ့၊၊ အဲဒါ ဦးကျော် ငြိမ်းက ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့‘ (၁၉၃၆ - ၁၉၄၅ )မြေအောက်သူပုန်အဖွဲ့ ဆိုင်ရာမှတ်စု ’ စာမျက်နှာ (၈)မှာ ရေးသားထားချက်ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဝိဓူရသခင်ချစ်မောင်ဟာ သခင်မြခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗဟို မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ကနေ မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ခွဲတွေအဖြစ် ခရိုင်(၂ဝ) အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရာမှာ အမှတ်(၁ဝ)ဖြစ်တဲ့ သာယာဝတီခရိုင်အဖွဲ့ ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်စာ ရင်းမှာ အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ပါပါတယ်၊၊ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာ မတွေ့ရတဲ့အတွက်၊ ဦးကျော်ငြိမ်းကသမိုင်းမှန်ဖြစ်စေရေးအတွက် အထက်မှာဖေါ်ပြထားသလို အတိအလင်းရေး သားထားတာ ရှိပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းသိမှာပါ၊၊ အဲဒီတော့….အခုလဲ ကျနော်က ဦးကျော် ငြိမ်းက စာရင်းမှာသာပါပေမဲ့၊ ဘယ်တိုင်းကိုမှ နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ဖူးတာ လက် တွေ့အားဖြင့် မရှိတဲ့အတွက်၊ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်အတိုင်းရေးသားခဲ့တာ ဘာမှ နာလိုခံခက်ဖြစ် စရာမလိုပါဘူး၊၊ ဒါဟာ သမိုင်းမှန်ပဲလေ၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းအနေနဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စဉ်းစားသုံး သပ်ပြောဆိုသင့်ပါတယ်၊၊
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက “ -- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စစ်တိုင်း(၁)တာဝန်ကို ဗိုလ်မောင်မောင်ကို လွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးမှူး ကိုဗဟိန်းလဲ တာဝန်ကျရာတိုင်းကို ရောက်မလာတော့ဘူး၊၊ ဒါဆို ကိုဗဟိန်းရော သူရဲဘောနည်းတာလား..စသည် စသည်ဖြင့် တွေးမယ်..မေးမယ်..၊ ခရစ်တီကယ်တွေးခေါ်မှု ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လို့ သရော်တော်တော်ဖေါ်ပြထားရင်း၊ ဦးကျော်ငြိမ်း-တာဝန်ကျတိုင်း(၆) ကို မသွားတာနဲ့သခင်ဗဟိန်း - တာဝန်ကျ တိုင်း(၁) မသွားခဲ့တာကို အတူတူပါပဲ သဘောမျိုး၊ ညီမျှခြင်းထိုးပြထားတာလဲမှတ်မှတ်ထင်ထင်တွေ့ရပါတယ်၊၊မသိသား ဆိုးဝါးလှချည်လား-ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းအဖေ ဦးကျော်ငြိမ်း တာဝန်ကျတိုင်းကို ရောက်အောင်မသွားခဲ့တာနဲ့သခင်ဗဟိန်း-တိုင်း(၁)ကို မသွားခဲ့တာဟာ နိုင်ငံရေးသဘောအရ ရော လက်တွေ့ ဖြစ်စဉ်အရပါ လုံးဝလုံးဝကိုမတူညီဘူး၊၊အဲဒီဟာကိုညီမျှခြင်းထိုးပြဖို့ ကြိုးစားရင် ၊အတူတူပဲလို့ထင်ရင်၊ လူရယ်စရာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊၊ သခင်ဗဟိန်း တိုင်း(၁)ကို မသွားတော့ တာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာ၊၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ် တိုင်လဲ အခြေအနေအရ တိုင်း(၁)ကိုမသွားတော့ပဲ၊ စစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးကိုကွပ်ကဲပြီး၊ တိုင်း(၇) နယ် မြေထဲမှာ အခြေစိုက်ရင်း တိုင်းအသီးသီးရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို ရှေ့ ဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် တာဖြစ်တယ်၊၊ ဖြူးမြို့ နယ်ထဲကို အစောကြီးကတည်းက ရောက်နေတဲ့ သခင်ဗဟိန်းကိုလဲ ရန်ကုန်ကို လာရန်မလိုတော့ပဲ ဖြူးမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး၊ တောင်ငူခရိုင်ထဲက ‘ရဲခေါင် ပြောက်ကျား’တွေကို ဦးစီးသွားစေဖို့ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်၊၊ အချက်အ လက် အထောက်အထားတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ‘ရဲဘော်မြ’ ရဲ့‘ဖက်ဆစ်တော်လှန် ရေး ပြည်သူ့ ရဲခေါင်ပြောက်ကျား’ ဆိုတဲ့ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၃၅)ထဲမှာလဲ ရှိပါတယ်၊၊ မယုံရင် ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းဖာသာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်၊၊ စာတွေကို အပိုဒ်လိုက်ချရေးပြနေရရင် မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ၊၊ သခင်ဗဟိန်းဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမစခင် အစောကြီး ကတည်းက ( ၁၉၄၄ သြ၈ုတ်)ကတည်းက၊ ပဲခူးစံပြတပ်ရင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ အိမ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရယ်၊ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်းတို့(၃)ဦးတည်းပဲ ဘယ်သူမှမသိအောင် လျှို့ ဝှက်တွေ့ ဆုံကြပြီး နောက်ပိုင်းကတည်းက အဲဒီ ဖြူးဒေသထဲသွားပြီး ပြောက်ကျားစစ် အတွက် အစီအစဉ်ရှိရှိ တာဝန်ယူပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်၊၊ သွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့လျှိှု့ဝှက် စည်းရုံးရေးတွေလုပ်၊ သင်တန်းတွေပေး၊ ပြောက်ကျားစစ်နည်းသစ်တွေကို ရေးသားပြုစုပြင် ဆင်ပေးနဲ့အခြေခံစခန်းဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပျိုးထောင်တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီးသား ဖြစ်တယ်၊၊ ပြောရရင် အစောကြီးကတည်းက သခင်ဗဟိန်းရဲ့ အခြေခံစခန်းဟာ ဖြူးနယ်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအရ၊ စည်းရုံးရေးအရ တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်၊၊ ဒါကို အဓိကအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်စိုးတို့ လောက်ပဲ လူအနည်းစုလောက်ပဲ သိထား ကြတယ်၊၊ တရုံး၊တဌာနတည်းအတူတူနေနေတဲ့ သခင်နု(ဦးနု)တောင်မသိသလို၊ ဦးကျော်ငြိမ်း လဲမသိပါဘူး၊၊ ဒါကြောင့်လဲ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွဲခါနီးအချိန် နီးနေပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဖြူးမှာရောက်နေတဲ့ သခင်ဗဟိန်းကို ရန်ကုန်ကိုတက်မလာစေတော့ပဲ၊ ဖြူးနယ်ထဲမှာနေဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်၊၊ ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေ အရ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က အစီအစဉ်တွေကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ် တယ်၊၊ ဒါ့ကြောင့် မသွားတာဖြစ်တယ်၊၊တကယ် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးဆင်နွဲကြပြီ ဆို တော့လဲ သခင်ဗဟိန်းဟာ ကိုယ်တိုင်ကာဘိုင်လွယ်ပြီး၊ လက်တွေ့စစ်မြေပြင်မှာ လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူမျိုး ဖြစ်တယ်၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ မတူဘူး၊၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး အတွင်းမှာ သခင်ဗဟိန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ တောင်ငူခရိုင်အတွင်းက ရဲခေါင် ပြောက်ကျားတွေရဲ့ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ပြခဲ့ကြတဲ့ တိုက်စွမ်းအားဟာလဲ ဘယ်လောက်ကြီးမားခဲ့သလဲဆိုရင်၊ ကြိုက်တဲ့ စစ်တိုင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်-ထိပ်တန်းက ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊၊ သြဂုတ်လ (၁၄)ရက်နေ့အထိ တိုက်ပွဲစာရင်းချုပ်အရ - ရန်သူဖက်ဆစ်ဂျပန်ပေါင်း( ၇၁၅၉ ) ယောက် ကျ ဆုံးစေခဲ့ပြီး၊ ရန်သူဒဏ်ရာရ ( ၂၇၇၃ )ယောက်၊ သုံ့ ပန်းအဖြစ်နဲ့ က (၅၃၈)ယောက်တောင် ရှိခဲ့တယ်၊၊ ဖက်ဆစ်ရန်သူ(၅၃၈)ယောက်အထိ သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန်ကို ထူးခြားတဲ့ တိုက်စွမ်းရည်ပါပဲ၊၊ တခြားလူမျိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတဲ့အခါ သုံ့ပန်း အဖြစ်ရဖို့လွယ်ပေမဲ့ ဂျပန်ကိုသုံ့ပန်းရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး၊၊ ဒီအချက်ကို မဟာမိတ်တွေကိုယ် တိုင်ကတောင် အသိအမှတ်ပြုကြတယ်-ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဖေါ်ထုတ်ပြော ဆိုခဲ့ရတယ်၊၊ ဒီအချက်တွေဟာ သခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီး(၁ဝ)တိုင်းစာအုပ် စာမျက်နှာ (၂၆၈) မှာလဲ ပါသလို၊ ‘ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးရဲခေါင်ပြောက်ကျား’ ဆိုတဲ့စာအုပ် စာမျက်နှာ (၃၃၆) မှာလဲ ပါပါတယ်၊၊
“အဲဒီတောင်ငူရဲခေါင်ပြောက်ကျားတွေကိုဦးစီးပြီး ခေါင်းဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဟာ သခင်ဗ ဟိန်းနဲ့ သခင်သန်းဖေပါပဲ၊၊ အဓိက နံပတ်တစ်ခေါင်းဆောင်က သခင်ဗဟိန်းပါပဲ၊၊”
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဦးကျော်ငြိမ်း ဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ၊၊ လက်တွေ့ အားဖြင့် ဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ၊၊ တိုင်း(၆) ကိုလဲ မသွားပဲ ဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲ၊၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး အတွက် မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့ လို့ပထမ ရက်ချိန်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်၊၊ နောက် ဧပြီ (၂)ရက် နေ့လို့သတ်မှတ်တယ်၊၊ အဲဒီလိုသတ်မှတ်ချက်အရ၊ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းက ရွှေတိ၈ုံဘုရားအနီး ( ယခု-တော်လှန်ရေးပန်းခြံ) မှာ တပ်မတော်စစ်ရေးပြအခမ်း အနားလုပ်ပြီး ‘ရန်သူကို အနိုင်တိုက်ကြ ’ဆိုတဲ့ စစ်ထွက်မိန့် ခွန်းတိုတိုပြောပြီး စစ်ထွက်အခမ်း အနားကိုလုပ်လိုက်တယ်၊၊ မတ်လ(၁၈)ရက်နေ့မှာ သခင်သန်းထွန်းက စစ်တရားဟောဖို့ဆို တာအကြောင်းပြပြီး သူစီစဉ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လျှို့ ဝှက်စခန်းရှိရာ ဖြူးတောင်ငူဖက်ကိုထွက်သွား တယ်၊၊ မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် တော်လှန်ရေးအတွက် ရန်ကုန် ကနေ-ပြည်-ရွှေတောင်ဖက်ကို ထွက်သွားတယ်၊၊ ဦးဗဆွေကတော့ ရန်ကုန်တာဝန်ခံမို့ရန်ကုန် မှာပဲ ရှိနေတယ်၊၊ ဦးဗဆွေ အဖမ်းမခံရသေးပါ၊၊
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်တာဝန်ကျရာ စစ်တိုင်းစစ်နယ်မြေဒေသတွေကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ အသီး သီးထွက်သွားနေကြတာကိုလဲ ဦးကျော်ငြိမ်းသိနေပါလျက် ဦးကျော်ငြိမ်းက တာဝန်ကျတိုင်း (၆)ရှိရာ ပျဉ်းမနားကိုမသွားပဲ ရန်ကုန်မှာပဲဆက်ရှိနေတယ်၊၊ ကိုယ်သွားရမှာကိုမသွားပဲ ဦး ကျော်ငြိမ်းဘာလုပ်နေတာလဲ၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းအကြောင်းပြတာကတော့ ‘ဒေါက်တာဗမော်နဲ့ သစ္စာရှိဟန်ဆောင်နေရမယ့် သခင်မြကို ဂျပန်က မယုံပဲသတ်မှာများတယ်၊၊ ဒါကြောင့် သခင်နု၊ ကိုလှမောင်နဲ့ သူ(ဦးကျော်ငြိမ်း)တို့ဟာ တောမခိုသင့်တော့လို့စဉ်းစားပြီး၊ အားလုံးညီညီညွတ် ညွတ်နဲ့သခင်မြနဲ့ အတူ ၈ျပန်အလိုတော်ရိဟန်ဆောင်ပြီး နေသင့်တယ်ဆိုတာကို ဦးလှမောင် နဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းက သခင်နုကို ဆွေးနွေးပြီး ဦးနုကလဲသဘောတူလိုက်တဲ့အတွက် နေလိုက်တာ လို့ ဆိုပါတယ်၊၊ အဲဒီအချက်အလက်တွေဟာ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့‘မြေအောက်သူပုန်အဖွဲ့ ဆိုင်ရာ မှတ်စု’မှတ်တမ်းထဲမှာ ပါပါတယ်၊၊ အဲဒီနေ့ဟာလဲ မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့ပါပဲ၊၊ အဲဒီရက်ပိုင်း တွေအတောတွင်းမှာပဲ ‘တပြည်လုံးအတွက် တော်လှန်ရေးရက်ကို ဧပြီ (၂)ရက်နေ့ အဖြစ်က နေ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာကိုလဲ ဦးကျော်ငြိမ်းသိပါတယ်၊၊ ဦးဗဆွေ ဂျပန်ကင်ပေတိုင်ရဲ့ အဖမ်းကို ခံရတာက၊ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ အဲဒီမှတ်တမ်းအရ မတ်လ (၂၉)ရက်နေ့ မှ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဦးကျော်ငြိမ်း အဲဒီနေ့အထိ တိုင်း(၆)ကို မသွားပဲနေနေတာ ဟာ ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မဟုတ်ပဲ၊ သခင်မြအတွက်ပဲဖြစ်နေတာ ထင်ရှားပါ တယ်၊၊ တကယ်က ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မှာ နေနေတာ-ဆိုတဲ့ ဖေါ်ပြ ချက်ကိုကမှားယွင်းနေပါတယ်၊၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့၊ သခင်တင်မြတို့ရဲ့ စာအုပ်ပါအ ချက်အလက်ကိုက ဦးကျော်ငြိမ်းအတွက် ဖာဖာထေးထေးဖေါ်ပြပေးထားရဘိသကဲ့သို့ဖြစ်နေ ပါတယ်၊၊ ဂျပန်ကင်ပေတိုင်က ဦးကျော်ငြိမ်းအိမ်ကိုလာမေးလို့ ဦးကျော်ငြိမ်း နောက်ဖေးပေါက် ကနေထွက်ပြေးရပြီး သခင်မြအိမ်သွားပုန်းနေရတဲ့နေ့ဟာ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဗိုလ်ကျော်ဇောတို့ တိုင်း(၄)ရှိရာ ပဲခူးဖက်နဲ့ တပြည်လုံးနေရာတော်တော်များများမှာ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကို မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့မှာပဲ စတင်ဆင်နွဲနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်၊၊ အဲဒီတော့ ဦး ကျော်ငြိမ်း ဘာလုပ်ပါသလဲ၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းကိုယ်တိုင်ရေး ‘မြေအောက်သူပုန်အဖွဲ့ဆိုင်ရာ မှတ်စု ’ မှာ - ‘မတ်လ (၂၈)ရက် ကင်ပေတိုင်လာရာကိစ္စအတွက် သခင်မြကတဆင့် အဓိပတိထံအ ကူအညီတောင်းသည်၊၊ ဂျပန်ပြည်သို့အတူအလည်သွားစဉ်က ခင်မင်ရင်းနှီးလာသော ဗိုလ် ချုပ်ကလေး အီချီဒါ ကိုလဲ တယ်လီဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းရာ ၊မကြာမီ မေဂျာဂျင်နရယ် က မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ သူအကာအကွယ်ပေးမည်ဟု အဓိ့ပတိ၏စကားပြန် ‘ဆိုင်တို’ထံမှ စကားပြန် လာပါသည်၊၊
မတ်လ (၂၉) ရက် ထိုနေ့နံနက် ကိုဗဆွေနှင့်ကိုတင်ညွန့်ကို ဂျပန်ကဖမ်းသွားသည်၊၊ တော် လှန်ရေးလုပ်ရန်အချိန်ကျပြီ၊ တော်လှန်ရေးနေ့ မှာ ဧပြီ (၂)ရက်နေ့ မဟုတ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက် ဖြစ်သည်၊၊ ပဲခူးနှင့်တပြည်လုံးတွင် (၂၇)ရက်နေ့က ထချနေကြပြီ၊၊ ပဲခူးသခင်ချစ်ထံမှ ဆက် သားလာသည်၊၊ ခင်ဗျား ယနေ့ပုန်းတော့မှ ဖြစ်မည်ဟု ကိုကျော်ညွန့်က ကိုဗဆွေကိုပြောပြီး အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာပြီးချိန်၌ ကိုဗဆွေကို ဂျပန်ကတက်ဖမ်းသည်ဟု နောင်မှ ကိုကျော်ညွန့်ပြောပြ၍ သိရသည်၊၊’ - တဲ့၊၊ ဦးဗဆွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက် ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးကျော်ငြိမ်း ဘာတွေများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ၊၊ မတ်လ (၂၉)ရက်ကနေ- ဧပြီလ (၂၂)ရက်နေ့ အထိ( ဂျပန်တွေ ရန်ကုန်က ဧပြီ (၂၃)ရက်နေ့ မှာ ဆုတ်ခွါမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်-မဆုတ်ခွါခင် တရက်အလိုအထိအတွင်း ) ဦးဗဆွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးကျော်ငြိမ်း ဘာတွေများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ၊၊ ဘာတခုမှ မတွေ့ရပါ၊၊
ဒါဖြင့်….. ဦးကျော်ငြိမ်း ရန်ကုန်မှာ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး မှတ် စုထဲကအတိုင်းပဲ ရေးထားချက်အတိုင်းပဲ ကြည့်ကြရအောင် -၊၊ ဂျပန်ကင်ပေတိုင်က လာရှာတဲ့ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ က စပြီး ဟောဒီလိုရေးထားပါတယ်၊၊ [ ကျွန်တော်သည် မတ်လ(၂၇)ရက် နေ့မှစ၍ မိမိအိမ်သို့မပြန်တော့ဘဲ ဂိုးဒင်းဘီဘီလမ်း နိုင်ငံခြားရေးရုံး၌သာနေတော့သည်၊၊ ည အခါစားပွဲပေါ်၌အိပ်သည်၊၊ အိမ်သားများကိုလည်း တိုးကြောင်ကြီးရွာသိုို့ပို့ထားသည်၊၊ ညအချိန် တွင် ရန်ကုန်တမြို့ လုံးမှာ စစ်ကားထရပ်ကားကြီးများစွာ ဥဒဟိုသွားလာနေသည် ကိုထောက်၍ မိတ္တီလာစစ်မျက်နှာဖက်၌ အဘယ်မျှ စစ်အရေးကြီးနေသည်ကို သိသာသည်၊၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံး မှာရှိသောရေဒီယိုမှာလည်း နိုင်ငံခြားသတင်းကို ခိုးနားထောင်ရာတွင် မကြားတချက်ကြားတ ချက်ဖြစ်နေသည်၊ညအချိန်၌ ရုံးရှေ့ ဖြတ်သွားနေသော ဂျပန်စစ်ကားကြီးများကိုကြည့်၍ ဘယ် ကားသည် ၈ျပန်ကင်ပေတိုင်မောင်းလာပြီး ငါ့ကိုဖမ်းမည်နည်းဟု တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရသည်၊၊ စစ်ရှုံးခါနီးတွင် ဂျပန်စစ်တပ်က မရမ်းကားဘူးဟု မည်သူပြောနိုင်မည်နည်း၊၊ ဂျပန်လက်တွင်း၌ အကျယ်ချုပ်မိနေသော ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမားတို့က စိတ်သောကရောက် ၍ ကြောက်နေကြသော်လည်း မြို့သူမြို့သားတို့က အသွားအလာပျက်ဟန်မတူကြချေ၊၊ ထို နှစ် ဧပြီ (၁၃)ရက်မှ (၁၆)ရက်နေ့ အထိ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတွင်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားများသည် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို စော်ကားဖျက်ဆီးကြသည့် ဂျပန်များကို သရော်ကြသည်၊၊
(အမေနိုးပါ့မယ် မာစတာရဲ့ ၊ ယော်ရောရှိ ယောရောရှိ)
(ဘီးကျိုးပါ့မယ် မာစတာရဲ့ ၊ ယော်ရောရှိ ယောရောရှိ)
(ကြမ်းကျိုးပါ့မယ် မာစတာရဲ့၊ ယော်ရောရှိ ယောရောရှိ)
မြို့သူမြို့သားပေါင်းများစွာတို့ကဤသံချပ်ကို ထိုးကြသဖြင့် ဂျပန်ကင်ပေတိုင်တို့ လည်း ဘယ် သူ့ကိုဘာမျှ အရေးယူ၍မရတော့ချေ၊၊ ဘယ်သူ့လက်ချက်ဟု တရားခံဖေါ်၍မရချေ၊၊ ဤ နည်းဖြင့် ရက်တွေကုန်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၄၅ ဧပြီ(၂၂)ရက်နေ့တွင် နံက်(၉)နာရီလောက်၊ ဂျပန် တပ်များ ရန်ကုန်မြို့မှ နောက်တနေ့တွင်ထွက်ခွါရတော့မည်၊၊ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကလည်း ဂျပန်နှင့် မော်လမြိုင်သို့ လိုက်ရတော့မည့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ချက်ချင်းစည်းဝေးတော့မည်ဟု သခင်နုထံမှ ကျွန်တော်သိရသည်၊၊ သူက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် ဖြစ် သည်၊၊ ထိုနေ့နံနက်တွင် ကိုလှမောင်(သံအမတ်ကြီးဟောင်း)နှင့် ကျွန်တော်တို့စိတ်အပူကြ ဆုံးမှာ ကိုဗဆွေကိစ္စဖြစ်သည်၊၊ ဝန်ကြီးအဖွဲ့မော်လမြိုင်မပြောင်းမီ ဂျပန်ဖမ်းထားသော ကိုဗ ဆွေကို လွတ်အောင်မလုပ်နိုင်လျှင် ဂျပန်အသတ်ခံရမှာသေချာသည်၊၊ ကိုဗဆွေကို ဝန်ကြီးအ ဖွဲ့နှင့်ခေါ်သွားနိုင်ခွင့် ဂျပန်ကိုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်၊၊ ထိုကိစ္စကိုခေါင်းဆောင်ရန် ကိုလှမောင် နှင့် ကျွန်တော်တို့သခင်မြကို ချဉ်းကပ်ရာ သခင်မြက ပျော့ညံ့ညံ့ဖြစ်နေသည်၊၊ ဂျပန်ကို သူမပြောရဲသလို ဖြစ်နေသည်၊၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် သခင်နုထံပြေးကြရ သည်၊၊ သခင်နုက ဤကိစ္စမျိုးတွင် ရဲဘော်စိတ်အပြည့်ရှိသည်၊၊ တက်ကြွမှုအပြည့်ဖြင့် ကျွန် တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ချက်ချင်း ဒေါက်တာဗမော်ထံ ခေါ်သွား၍ ကိုဗဆွေအတွက် ဂျပန်ကို ပြောပေးရန် ပူဆာသည်၊၊ဒေါက်တာဗမော်သဘောတူသည်၊၊ ] - တဲ့၊၊
ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ မှတ်စုအရ ဆိုရင်- (၂၃)ရက်နေ့ ဂျပန်တွေ ရန်ကုန်က ဆုတ်ခွါအပြီး တရက် နှစ်ရက်လောက်အတွင်း ဦးဗဆွေ လွတ်လာခဲ့တဲ့အတွက် ဧပြီ(၂၄)ဝန်းကျင်ခန့်မှာ ဦးဗဆွေ လွတ်လာခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်၊၊ အဲဒီတော့ ဦးဗဆွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန် မှာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ ဦးဗဆွေအတွက် ဘာတွေများလုပ်ဆောင်ပေးနေခဲ့ရ လို့ ပါလဲ၊၊ ဦးဗဆွေအဖမ်းခံရတာက မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ မှ၊ အဲဒီမတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ က ဧပြီ (၂၂)အကြား ဦးကျော်ငြိမ်းဘာတွေလုပ်နေပါသလဲ၊၊ တကယ်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအ တွက် နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်လိုက်တာက မတ်လ(၂၇)ရက်၊၊ မတ်လ(၂၇)ရက်အကြား တာဝန်ကျတိုင်း(၆) ကိုသွားရမှာကဦးကျော်ငြိမ်း၊၊ မသွားပဲ ပထမတော့သခင်မြအတွက် ဂျပန် အလိုတော်ရိဟန်ဆောင်ပြီးနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်၊၊ ဦးဗဆွေ (၂၉)ရက်နေ့ အဖမ်းခံရပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်၊၊ အဲဒီမတ်လ (၂၉)နဲ့ ဧပြီ လကြားမှာ ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက် မယ်မယ်ရရ ဘာမှလဲ လုပ်ခဲ့တာမတွေ့ရပဲ၊ ဂျပန်ဆုတ်ခါနီးတရက်အလိုမှ သခင်နုအကူအညီ-ဒေါက်တာဗမော်အကူအညီ ယူခဲ့တာဖြစ် ကြောင်းတွေ့နေရပါတယ်၊၊ ဒီကြားထဲကပဲ သမိုင်းကြောင်းရေးသူ သခင်တင်မြ၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်- စတဲ့စတဲ့ပု၈္ဂိုလ်တွေက ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ ဦးဗဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မှာနေခဲ့ရတယ်၊ တိုင်း(၆)ကိုမသွား၊ ရန်ကုန်မှာ ဦးဗဆွေနဲ့ တွဲဖက်တာဝန်ပေး- စသဖြင့် စသဖြင့် အတိုချုပ်ရေးသားဖေါ်ပြ မှတ်တမ်းတင်ပေးထားကြတာတွေဟာ အဖြစ်မှန်နဲ့ဆိုရင် တော်တော်လေးကို မြှင့်တင်ပေးထားဘိသကဲ့သို့တောင် ဖြစ်နေပါသေးတယ်၊၊ ထားပါတော့… ကျနော်က အဲဒီလိုအချက်အလက်တွေအရ ဦးကျော်ငြိမ်းကို ဦးဗဆွေနဲ့တွဲပြီး ရန်ကုန်တာဝန်ခံ များဖြစ်ကြတယ်လို့ ရေးခဲ့တာဟာ ဘာများမှားပါသလဲ၊၊ လုံးဝ လုံးဝကို မမှားပါ၊၊
အဲဒီလိုတွေကြားထဲကပဲ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းဟာ မကျေနိုင် မချမ်းနိုင် ကပ်သပ်ပြောနေတာဟာ ဘာရည်ရွယ်ချက်ပါလဲ၊၊ ခရစ်တီကယ်တွေးခေါ်မှု ရှိခဲ့ရင်ပေါ့ - ဆိုပြီး၊ ဦးကျော်ငြိမ်း-တိုင်း(၆) မသွားတာကို၊ သခင်ဗဟိန်း-တိုင်း(၁)မသွားတာနဲ့ပါ ယှဉ်ထိုးပြီး ညီမျှခြင်းချပြသလို လုပ်လာ တာကတော့ ကမ်းကုန်အောင် မသိသားဆိုးဝါးမှုပါပဲ၊၊ ဦးပုညရဲ့အဆိုမျိုးနဲ့ပြောရရင် - ‘မိုးကြိုးနဲ့ အီးသံလို ခရီးမှန် ကွာလွန်းလှလေး-’လို့ ပဲ ပြောရတော့မှာပါ၊၊
ဒုတိယတချက်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတုန်းက စစ်တိုင်းနိုင်ငံရေးမှူးတွေဟာ ကွန်မြူနစ် တွေချည်းဖြစ်ကြတယ်-ဆိုတဲ့ အတိုချုပ်ရေးသားချက်အပေါ် မကျေနိုင်မနပ်နိုင် ဖြစ်နေရတာက လဲ အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့ - သူ့ အဖေ ဦးကျော်ငြိမ်းအတွက် အသေအလဲကာကွယ်နေတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းက ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီက ဖြစ်နေတော့ တန်းတူထပ်မျှ လုပ်ချင်နေတဲ့သဘောပါပဲ၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက- ‘ထို့ကြောင့်အချက်အလက် အမှန်က ပြည်သူ့ရေးတော်ပုံပါတီက ဦးကျော်ငြိမ်းသည် တိုင်း(၆) နိုင်ငံရေးတာဝန်ခံ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီက သခင်ချစ်က တိုင်း(၄)နိုင်ငံရေးတာဝန်ခံ၊ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီက ဦးဗဆွေကြီးက ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးတာဝန်ခံ၊ ထို့ကြောင့်ဝင်းတင့်ထွန်းရေးတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံရေးမှူး များမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်း ဖြစ်ကြသည်ဆိုသည့်အချက်မမှန်၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ၊၊’ လို့တွင် တွင်အော်နေရှာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ‘ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီ’ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီလို့ တွင်တွင်အော်နေတဲ့အပေါ် ကျနော်ကထပ်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးမယ်၊၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ က ဦးကျော်ငြိမ်းက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ဘယ်မှမသွား၊ ဦးဗဆွေက မတ်လ(၂၉)ရက်က တည်းကဂျပန်အဖမ်းခံထားလိုက်ရတာကြောင့် ဂျပန်ရန်ကုန်ကဆုတ်သွားမှသာ ပြန်လွတ်လာ၊ တပြည်လုံးအကြီးအကျယ်ချနေကြစဉ်တလျောက်မပါနိုင်၊၊ ဒါကြောင့် သခင်ချစ် တယောက်ပဲ ပါ၊၊ သခင်ချစ်တယောက်တောင် ‘ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ’က ဆိုတာ ဆိုင်းဘုတ်သဘော မျှသာပါ၊၊အနှစ်သာရကျကျ ပြောရလျှင်-ကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့တောင်ဆိုနိုင်၊ ဒါကြောင့် တ ကယ်တိုက်နေကြတဲ့ တကယ့်ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာ စစ်တိုင်းနိုင်ငံရေးမှူးတွေ ဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းလို့ အတိုချုပ်ချုပ်ပြီးရေးလိုက်တာဟာ အမှားလို့မဆိုနိုင်၊၊ တကယ် လို့နောင်မှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သည့်ထက်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်ဖြည့်စွက်ချင် တယ်ဆိုပါက‘ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းလိုလို ဖြစ်တယ်’ဆိုပြီး ‘လိုလို’ နှစ်လုံးတည်းပဲထည့်ပြီး ပြင်နိုင်ပါတယ်၊၊ ကျနော့်ရဲ့စာအုပ်မှာ ‘ရည်စူးပန်ကြား အမှာစကား’မှာ နောင်မှာပိုမိုပြည့်စုံ အောင်ဖြည့်ဆည်းသွားပါ့မယ်လို့ ကြိုတင်ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်၊၊
တကယ်က ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ-ဆိုကာက အခုချိန်အထိ ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်၊၊ ဒါကြောင့်သခင်မြနဲ့အရင်းနှီးဆုံးရဲဘော်လဲဖြစ်၊ အာဇာနည်နေ့တိုင်းသခင်မြအတွက် အထိမ်းအ မှတ်အဖြစ် နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သူ့အိမ်မှာဆွမ်း ကျွေးလုပ်လေ့ရှိတဲ့ သခင်ခင်အောင်(သာယာဝတီ)ကိုယ်တိုင်က သခင်မြရဲ့ရာပြည့်အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ၁၉၉၇ခုနှစ်အောက်တိုဘာ(၇)ရက်နေ့ကျင်းပပွဲမှာ ‘ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ ကို သခင်မြက ဖွဲ့ခဲ့တာလား’ဆိုတဲ့ တစုံတဦးရဲ့ အမေးကို ‘အဲဒီကိစ္စက ရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ဘာမှ အတိအကျပြောလို့မရဘူး၊ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ဘယ်သူမှဘာမှ ထင်ထင်ရှားရှားပြောခွင့် လုပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ’လို့ ဖြေခဲ့ရဖူးတာရှိပါတယ်၊၊ ၁၉၉၇၊ဒီဇင်ဘာ၊မိုးဂျာနယ်-တက္ကသိုလ် စိန်တင်ရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးသခင်မြ နှစ်တစ်ရာပြည့်ဆောင်းပါးမှာ ပါပါတယ်၊၊ အဲဒီ့ သခင်ခင်အောင်ဟာ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ မြေအောက်သူပုန်အဖွဲ့ ဆိုင်ရာမှတ်စုထဲမှာ ပါတဲ့- သခင် ခင်အောင်ပါပဲ၊၊ မတ်လ(၂ဝ)ရက်နေ့ခန့်မှာ သခင်မြအိမ်မှာနေတဲ့၊ သခင်မြရဲ့အတွင်းဝန်က လေးဖြစ်တဲ့ သခင်ခင်အောင်ဟာ သူ့အဖေကာလဝမ်းရောဂါဆန်ဆန်ဖြစ်နေလို့ သာယာဝတီ ကို ချက်ချင်းသွားရမယ်ဆိုပြီး၊ သခင်သန်းထွန်းရဲ့လျှို့ဝှက်တာဝန်ပေးထားချက်အရ၊ သာယာ ဝတီဖက်ကို လေထီးဆင်းကြမယ့်သူတွေအတွက်အစီအစဉ်လုပ်ဖို့ သခင်မြဘေးကနေ သခင်မြ ကိုထားခဲ့ပြီး တော်လှန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ပြေးသွားခဲ့တဲ့သူဟာ ဒီသခင်ခင်အောင် ပါပဲ၊၊သခင်ခင်အောင်ဟာ ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်း အဖမ်းမခံ၊ထောင်မကျခဲ့ရဖူးတာ မရှိခဲ့ပါဘူး၊၊ ကိုကိုးကျွန်းလဲ အပို့ခံခဲ့ရဖူးပြီး၊ နဝတ-နအဖခေတ်မှာလဲ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့ မှာ တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်း အသက်(၉ဝ)ကျော်မှ ဆုံးသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊၊ နဝတဗိုလ်ခင်ညွန့် က ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်ထံ သခင်ဗသိန်းတင်ရဲ့ပေးစာကို ပို့ခဲ့သူလို့လဲ အပြောခံခဲ့ ရသူဖြစ်ပါတယ်၊၊ သခင်မြခေါင်းဆောင်တဲ့မြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခရိုင်အဖွဲ့ ခွဲ(၂ဝ)မှာ သာယာဝတီခရိုင်ရဲ့နံပတ်တစ်ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဆိုလိုတာက.. မြေ အောက်အဖွဲ့ မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သခင်ခင်အောင်ကတောင် ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီ ပေါ်ပေါက်လာမှုဟာ ရှုပ်တွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ရပါတယ်၊၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီဖက်က ပြောမယ်ဆိုရင် - လျှို့ဝှက်ရပ်တည်နေရတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ တရားဝင်ရပ်တည်နေတဲ့ တို့ ဗမာအစည်းအရုံးကြားမှာ တော်လှန်တက်ကြွတဲ့သူတွေကို စုစည်းဘို့‘ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ပါတီ’ကို ဖွဲ့လိုက်တာပဲ၊၊ ဒါကြောင့်-ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာလဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ တို့ ဗမာအစည်းအရုံးမှာလဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလုပ်နေတဲ့ သခင်အောင်ဆန်းဟာ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီမှာလဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူလိုက်တာဖြစ်သလို၊ သခင်ဗဟိန်းတို့၊အာအီးတီဦးကျော်ငြိမ်းတို့လို ကွန်မြူနစ်တွေလဲ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ပါနေတာ ဖြစ်တယ်၊၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်က အိန္ဒိယရော ဗမာပြည်မှာပါ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် တရားဝင်ထောင်လို့မရဘူး၊၊ အဲဒီခေတ်က ဂရိတ်ဗြိတိန်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPGB )ပါတီက ကမကထပြုဖွဲ့မှ တတိယကွန်မြူနစ်အင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့စည်းမျဉ်းအရ ကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ် နိုင်တယ်၊၊ အဲဒီတော့ (CPB) က တရားမဝင်ပါတီ၊၊ ဗမာပြည်မှာတရားဝင်ပါတီက တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၊ (CPB) နဲ့တို့ ဗမာအစည်းအရုံးကြားမှာ တက်ကြွတဲ့သူတွေကိုစုစည်းဘို့ အရေး တော်ပုံပါတီကို ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ကွန်မြူနစ်တွေရော ကွန်မြူနစ်မဟုတ်သူတွေပါ ပါလာ တယ်၊၊ မာ့က်စ်ဝါဒသမားရော မာ့က်စ်ဝါဒဆန့်ကျင်သူတွေပါ ပါလာတယ်၊၊ ဆရာချစ်က မာ့က်စ် ဝါဒယုံကြည်သူအဖြစ်ပါလာတယ်၊ဦးကျော်ငြိမ်းက မာ့က်စ်ဝါဒဆန့်ကျင်သူအဖြစ်နဲ့ ပါလာတယ်၊၊ အရေးတော်ပုံပါတီကတော့ အရေးတော်ပုံပါတီပဲ၊၊ ၁၉၄၄အောက်တိုဘာလဆန်းထဲမှာ သခင် ချစ်အပါ-ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ဟာ ဒေးဒရဲနယ်မှာခိုနေတဲ့ ကွန်မြူနစ် သခင်စိုးဆီ သွားတွေ့ကြပြီး၊ ၁၉၄၄ခုအောက်တိုဘာ(၃)ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့‘တော်လှန်ရေးတပ်ဦး’ ဆိုတာဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတဲ့အခါ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင် ဖျက်လိုက် ပြီး တပါတီတည်းအဖြစ်၊ ‘ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်)’ဆိုတဲ့နာမည်ကို ခံယူလိုက်ကြကြောင်း ကျေညာချက်တောင် ထုတ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်၊၊ အဲဒီအခေါက်မှာ ခေါင်းဆောင်သွားခဲ့သူဟာ ဆရာ ချစ်(သခင်ချစ်)ပါပဲ၊၊ အဲဒီလိုတပါတီတည်းလုပ်ရေးကို သဘောတူခဲ့ကြတာအပေါ် ဦးကျော်ငြိမ်း တောင် တအံ့တသြဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ မှတ်စုထဲမှာ-စာမျက်နှာ (၁၄)မှာ- ‘ကျွန်တော်တို့ သည် သခင်ချစ်၊ ဗိုလ်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ အုပ်စုက မိမိတို့ အဖွဲ့ ကြီး (ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံအဖွဲ့)ကို ဖျက်သိမ်းသည်အထိ သဘောတူခဲ့သည်ကို အံ့သြမိ သည်၊၊ ’ လို့တောင်ရေးထားပါတယ်၊၊ နောက်ပိုင်းမှ သခင်စိုးရဲ့မိုက်လုံးကြီးမှုနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာ ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလဲဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့တာဟာ ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်၊၊ သခင်ချစ်ဟာ မာ့က်စ် ဝါဒီလဲဖြစ်တာကြောင့်၊ အဲဒီကာလကတည်းက ဆိုင်းဘုတ်ကသာ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံနဲ့ ဆက်ကျန်နေပြီး သူ့ အသွေးအသားက ကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေပြီလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ယူဆတယ်၊၊ ဒါကြောင့်လဲ ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုင်းဘုတ်တရားဝင်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီဖက်ကို လုံးဝရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်၊၊ စာဖတ်သူများ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ကျားကုတ်ကျားခဲပြောနေတဲ့ နောက်ဆုံးတချက်က သခင်ဗဟိန်းနဲ့ သခင် တင်မြကိစ္စပါ၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက- ‘သခင်တင်မြ ပြဿနာကို ကြည့်ရင်လဲ ကျနော့်အယူအဆ ကတော့ တယောက်ယောက်က ဝင်းတင့်ထွန်းလို့ အစောကြီးပြောင်းရေးလိုက်တယ်လို့ သံသယရှိတယ်’တဲ့၊၊ ကြည့်စမ်း.. ဘယ့်လောက်အောက်တန်းကျလိုက်တဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါလဲ၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ တန်အောင်သာတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့၊ အဲဒီလိုအောက်တန်း ကျကျလုပ်တတ်တာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းအဖေ ဦးကျော်ငြိမ်းပဲရှိလိမ့်မယ်-လို့ ၊၊ သူ့ များဒိုင်ယာရီ ကို သူများရေချိုးသွားနေတုန်းခိုးဖတ်တာ၊ ဗိုလ်နေဝင်းကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပေးဖို့ဦးနုကို မျက်ရည်ထွက်ပြီးငိုပြတာ၊ ဗိုလ်ဇေယျနဲ့ဗိုလ်နေဝင်းကြား တို့မီးရှို့မီးလုပ်ပြီး ‘အောင်ပြီအောင် ပြီ’ လို့ အော်ပြီး ဝမ်းသာအူမြူးဖြစ်ခဲ့တာ- ဦးနုရဲ့ တာတေစနေသားကိုပဲ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါ၊၊
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သူအတ္တနောမတိနဲ့မကိုက်တော့ ကျနော်ကိုးကားရှင်းလင်းပြခဲ့တဲ့ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသမိုင်းစာအုပ်ကြီးထဲက အချက်အလက်တွေကိုတောင် ကရောကမယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တယ်၊၊ သခင်ကြီးတွေရာနဲ့ချီပြီး ရေးသားပြုစုထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတောင် စာမျက်နှာ (၅၇၇)နောက်ပိုင်းကစပြီး- ‘စာစီစာကုံးဆန်ဆန် ရေးသားခြင်းသာဖြစ်တယ်’ တို့‘ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရေး သားထားတဲ့လေသံမရှိ’တို့ဆိုပြီးလုပ်တော့တာပါပဲ၊၊ ပြီးတော့ကျနော်ရေးတာကိုတောင် သေချာ ဖတ်ဟန်မတူပါ၊၊ ‘ဖတပလ’ဖွဲ့တော့ သခင်သိန်းဖေက အိန္ဒိယမှာပါ၊၊ သခင်ကြီးတွေကော ဒီအစည်းအဝေးမှာ ရှိလို့လား’ တဲ့၊၊ လက်ရှိ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့ က သခင်သိန်းဖေ တို့လဲပါတယ်ဆိုတာ၊ မေးကြည့်ချင်မေးကြည့်နိုင်ဖို့ပြောတာကို၊ ထိုးနှက်ချင်ဇောအားနဲ့ ဘာကို မှ ခွဲခွဲခြားခြားမသိနိုင်တော့သလိုပါပဲ၊၊ ဦးမြဟန်ရဲ့သမိုင်းအဘိဓါန်စာအုပ်ကိုပါ ပူးတွဲဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပြန်တော့လဲ ‘ဦးမြဟန် ရဲ့ သုတေသနပြုမှု မည်မျှသေချာတိကျတယ်ကို ကျနော်မသိ ပါ’လို့လုပ်ချလိုက်ပြန်တယ်၊၊ စာတွေကို တော်တော်ကိုဖတ်သယောင်ယောင်ပြောပြီး အဲဒီအ ချက်အလက်တွေကိုတောင် မသိဘူးဖြစ်နေတာက ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းပါ၊၊ သခင်ကြီးတွေ ယူထား တာက ‘သခင်တင်မြ’ မပါခင်၊ အရင်ဆုံး ပထမဆုံးကျတဲ့ ‘ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့အ ဖွဲ့ချုပ်’ ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့ အစည်းအဝေးပါစာရင်းပါ၊၊ ဒါကြောင့် သခင်ကြီးတွေက ပထမဆုံးလို့ ပြောတာပါ၊၊ ၁၉၄၄ ခုနှစ် သြဂုတ်(၂၃)ရက်နေ့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်အိမ်အစည်းအဝေးက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့စာရင်းပါ၊၊ သခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီး(၁ဝ)တိုင်းပါစာရင်းက တော် တော်နောက်ကျပါတယ်၊၊ ၁၉၄၅ မတ်လ (၁)ရက်ကနေ (၃)ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ‘ဦးစီးအဖွဲ့’စာရင်းပါ၊၊ နေရာကတော ဦးထွန်းမြတ်လမ်းဒေါင့်က ဗိုလ်ချုပ်အိမ်မှာ ပါပဲ၊၊ ပထမဆုံးဟာ ၂၃-၈-၁၉၄၄အစည်းအဝေးစာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက် သခင်ကြီးတွေကလဲ အဲဒါကိုပဲ အဓိကပထမဆုံးအဖြစ် ယူခဲ့တာဖြစ်သလို၊ သူ့ စာအုပ်ကို (၅)နှစ်ကြာသုတေသန ပြုပြီးမှ ရေးသားထားတဲ့ ဦးမြဟန်ကလဲ အဲဒီအတိုင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဝင်းတင့်ထွန်းကလဲ အဲဒီအတိုင်း ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း- ထိကပါးရိကပါးပြုပြီး စွပ်စွဲနေသလို၊ မသိ သားဆိုးဝါးမိုက်မဲလွန်းလှစွာ တဖက်သတ်စွပ်စွဲပြောဆိုနေသလို မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလောက် ပြီလို့ထင်ပါတယ်၊၊ အကိုးအကားအဖြစ် ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့၊ ၂ဝဝ၄စာပေဗိမာန်က ထုတ်တဲ့ ‘ဖိုးအောင်လေး’ရဲ့“မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ရက်စဉ်သမိုင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါ၊၊
ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ကိုယ့် အတ္တနောမတိနဲ့ကိုယ်-ပြောချင်ရာတွေ ပြောနေတာကိုလဲ စာတွေရှည် နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေကို အားနာလှပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်မတုံ့ပြန်လို တော့ပါဘူး၊၊သမိုင်းတွေရေးတဲ့အခါမှာ အကယ်ဒမစ်ဆန်ဆန်ရေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အောက်ခြေ မှတ်စု (Foot Note)၊ ကျမ်းဆုံးမှတ်စု (End Note)၊ နံဘေးမှတ်စု (Marginal Note)တွေ ပါကို ပါရပါမယ်၊၊ ကျမ်းတွေ-သမိုင်းတွေမှမဟုတ်၊ လိုအပ်တဲ့စာတမ်းတွေ ဆောင်းပါးတွေမှာ အဲဒီ လိုမှတ်စုတွေပါသုံးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာငြင်းစရာမလိုပါ၊၊ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်-အဲဒီလို ကိုးကားမှတ်စု(Note)တွေကိုမထည့်နိုင်ပဲ အဆုံးကျ မှ ကျမ်းကိုးစာရင်း၊ ရည်ညွှန်းကိုးကားစာရင်းတွေပဲ ထည့်သွင်းပြုစုထုတ်ဝေနေရတာ တွေလဲ- ဗမာပြည်မှာအများကြီးရှိပါတယ်၊၊ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း တို့ ၊ ဦးမြဟန်ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓါန်တို့ဟာ နောက်ဆုံးမှ ကျမ်းကိုးစာရင်း ထည့်ပြီးထုတ်ဝေခဲ့ရတာတွေပါ၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရမ်းရမ်းကားကားပြောသလို ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊၊
အဲဒီတော့ အခုနောက်ဆုံး ပြောပါတော့မယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ‘အရေးထားတုံ့ ပြန်မနေပါနဲ့ဗျာ’ ‘သူကအခုလိုပြောနိုင်ဖို့တမင်စင်ရှာနေတာမှာ၊ သူ့ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက် အောင်၊ တန်းထားပြီး တုံ့ပြန်မနေပါနဲ့ ’ လို့ အသီးသီး ပြောကြဆိုကြ စေတနာနဲ့ သတိပေး ကြတာတွေလဲရှိပါတယ်၊၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်- စတဲ့စတဲ့ ပြည်ပတွေကနေ ပြောကြ တာလဲ ရှိသလို၊ အနီးအနားကနေ ပြောကြတာတွေလဲ ရှိပါတယ်၊၊ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျနော် ကတိပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်သလို ကျနော်ကလဲ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ပကတိရုပ်ပုံမှန်ကို အတိုင်း သား မြင်နေရပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် တကြောင်း၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပထမတုံ့ပြန်ချက်တုန်း ကတည်းက ပြောထားပြီးသား။ ဒီကနေ့လိုကာလကြီးမှာ ‘အဓိက ပျောက်’ ‘ဘုံရန်သူ ပျောက်’ ဖြစ်စေပြီး ‘ပလုံစီ အမြှုပ်ထရမယ့်ကိစ္စတွေကို တကယ်ကို မလုပ်ချင်တာကြောင့်ပါ၊ ကျနော်ဟာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကို တန်းထားတုံ့ ပြန်ဖို့ သဘောထားမရှိတော့ပါ၊၊အခု နောက်ဆုံးတုံ့ ပြန်ချက် အဖြစ် တုံ့ ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
စာရှုသူများကိုလဲ တော်တော်ကို အားနာမိပါတယ်၊၊ ဒါဟာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းနဲ့ အပြန်အလှန် နောက်ဆုံးတုံ့ ပြန်ချက်ပါပဲ၊၊ အဲဒီတော့…
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကို နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဒါလောက်တတ်တယ် သိတယ် နားလည်တယ် လုပ်နေမယ့်အစား၊စာတအုပ် ပေတအုပ်ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး ရေးသားထုတ်ဝေကြည့်ပါဦး၊၊ ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ အဖေ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့‘ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း’ တို့ ‘၁၉၃၆
-၁၉၄၅ မြေအောက်သူပုန်အဖွဲ့ဆိုင်ရာမှတ်စု’တို့ကိုပဲ စာအုပ်အဖြစ်၊ လူတွေကြား ကျယ်ကျယ် ပြန့် ပြန့် ချထား ထုတ်ဝေလိုက်ပါလို့လဲ ပြောချင်ပါတယ်၊၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ပြောထားတယ်- ‘ဦးကျော်ငြိမ်းကို (မုန်း)လို့ရပါတယ်၊၊ (မုန်း)ခွင့်ရှိပါတယ်၊၊ သို့သော် ဦးကျော်ငြိမ်းကို (မုန်း)တာနဲ့ ရာဇဝင်ထဲက ဆွဲနှုတ်ဖို့မလုပ်ကောင်းပါ ’ ဆိုတာကိုလဲ နောက်ဆုံးပြောလိုက်ချင်ပါတယ်၊၊ စိတ်ချ -စိတ်ချ- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း၊၊ ဦးကျော်ငြိမ်းကို ရာဇဝင်ထဲကဆွဲမနှုတ်ပါ၊၊ ရာဇဝင်ထဲကို ထားခဲ့မှာပါ၊၊ သမိုင်းဧည့်ခန်းဆောင်ထဲမှာ ဖြစ်မလား၊ သမိုင်းပြတိုက်ထဲမှာဖြစ်မလား၊ သမိုင်း အမှိုက်ခြင်းတောင်းထဲမှာ ဖြစ်မလား-ဆိုတာကတော့၊ ပြည်သူလူထုကြီးကပဲ ရွေးချယ်သတ် မှတ်ပေးကြမှာပါ၊၊ သမိုင်းကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းသိမြင်ကြမယ့် နောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ် တွေကပဲ ကောင်းကောင်းကြီး နေရာရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးကြမှာပါ၊၊
ဒါ- နောက်ဆုံးတုံ့ ပြန်ချက်ပါပဲ၊၊
( ဝင်းတင့်ထွန်း )
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:49 AM ,5comments
လူထုခေါင်းဆောင်အား လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံခြင်း
နိုင်ငံတခု၊ တိုင်းပြည်တခုမှာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်၊ ဖက်ဆစ်စနစ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊ ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင် စတဲ့ စနစ်ဆိုးတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရင် နိုင်ငံအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပျက်ယွင်း ယိမ်းယိုင်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှောင့်နှေးသွားလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ခေတ်ပျက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နိုင်ငံရေးအာဏာ၊ စီးပွားရေး ချုပ်ကိုင် ခြယ်လှယ်နိုင်မှု စတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရယူလေ့ရှိတဲ့ မသူတော်လူတန်းစားတွေ ထွက်ပေါ် လာလေ့ရှိသလို၊ စနစ်ဆိုးကို တွန်းလှန်တဲ့ တော်လှန်သော လူတန်းစားတရပ်လဲ ပေါ်ထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ ဒီတော်လှန်သော လူတန်းစားထဲမှာလဲ ဖောက်ပြန်သော ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေ ပေါ်လာတတ်သလို၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို အမှန်တကယ် ရှေးရှုတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေလဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီတော်လှန်ရေးသမားတွေထဲမှာလဲ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ခေါင်းဆောင်ဖို့ အများက ယုံကြည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်စင်မြင့်ပေါ်ကို တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်ပြီး တက်ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မည်သူမျှ ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မိမိဘာသာ ခေါင်းဆောင်လို့ ထင်နေကြသူတွေပါ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီးထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့၊ လူထုတိုက်ပွဲထဲမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အရေးမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှုက အရေးကြီးသလို၊ ဒီခေါင်းဆောင်ကို လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံပေးနိုင်မှုကလဲ အရေးပါတဲ့ အချက်တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ၀န်းရံပေးမှုလို့ ပြောတဲ့အခါ အချို့က ဒီခေါင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပါတီတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရောက်တာ၊ ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ အနီးမှာနေတာလို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်သလိုလို ရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ မြေပေါ်လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတဦးအနေနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရောက်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် မြေအောက်လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတဦးအနေနဲ့ကတော့ မြေအောက်ယူဂျီ စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ လိုင်းပူး၊ လိုင်းဆက်တာတွေ မလုပ်ရပါဘူး။
ဒီလိုမဟုတ်ရင် မြေအောက်ယူဂျီကလာပ်စည်းတွေကို ဒုက္ခဖြစ်စေရုံမက လူထုခေါင်းဆောင်ကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမား၊ နိုင်ငံတကာ ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားမှု တွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ မလိုအပ်တဲ့ လိုင်းပူး၊ လိုင်းဆက်မှုတွေဟာ မြေအောက်ယူဂျီသမား တွေလောက်တော့ မိမိအပေါ်မှာ အန္တရာယ်မများပေမယ့်၊ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ မြေပေါ် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကျရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုဟာ တာဝန်သိတတ်မှုနဲ့ ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ မိမိရဲ့ တက်ကြွမှု၊ တာဝန်ယူလိုမှုတွေကို အချိန်အခါ၊ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သတိတရား၊ တာဝန်သိတတ်မှုတို့နဲ့ ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံမှုဆိုတာဟာ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာ၊ အနီးကပ်တွေ့ဆုံ ဆက်သွယ်တာတွေကိုတင် ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းဆောင် ကိုင်စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ဦးတည်ချက်ကို တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ လမ်းစဉ်၊ ဦးတည်ချက်၊ မိမိတို့ ယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်၊ ဦးတည်ချက်တို့နဲ့ ချိန်ထိုးလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး တူညီတဲ့ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်၊ ကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ခွဲခြားပြီးမှ လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ လိုအပ်ချက်အရ ချိတ်ဆက်ထိစပ်မှု၊ တာဝန်ခွဲဝေမှု၊ တွေ့ဆုံမှုဆိုတာတွေက ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့ လေ့လာချက်အရ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရေး ဦးတည်ချက်တွေမှာ အတွေးအခေါ် သုံးရပ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။ ပထမတခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူမ ကိုင်စွဲထားတဲ့ လမ်းစဉ်က အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတခုက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၀ါ) အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူမကိုင်စွဲတဲ့ လမ်းစဉ်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး (၀ါ) ဒိုင်ယာလော့ခ် ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယဦးတည်ချက်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံက လမ်းစဉ်တွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ တနိုင်တပိုင် ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့၊ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ကြရမှာပါ။ လူထုခေါင်းဆောင် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်ကတော့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူငယ်ထု စွမ်းအား တိုးတက်မြင့်မားရေး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရေး ဦးတည်ချက်တွေဟာ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ တသားတည်း ကိုက်ညီနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို သန်းငါးဆယ်ကျော် လူဦးရေရှိနေတဲ့ တိုင်းပြည်တခုအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကို ခေါင်းဆောင် တယောက်တည်းက အကောင် အထည် မဖော်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးကို လူထု ခေါင်းဆောင်က မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာအောင် လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ပြည်သူတရပ်လုံးက ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လူထုခေါင်းဆောင်က မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်လာဖို့ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ မြန်မာ တမျိုးသားလုံးက ကြိုးပမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ တဦး၊ တယောက်၊ တဖွဲ့တည်းက မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ တို့နိုင်ငံ၊ တို့တိုင်းပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အရင်းတည်ပြီးမှ ကျရာကဏ္ဍကနေ ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံတော် အရေး ဦးတည်ချက်တွေကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံကြရာမှာလဲ လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံနိုင်ကြဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စနစ်တခုပါ။ စနစ်တခု ထွန်းကားလာဖို့ တည်ဆောက်ယူရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး (Democratization) ကို အကောင်အထည်ဖော်ကြရပါတယ်။ ဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ကြရာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်နှစ်ဆင့် ရှိပါတယ်။ ပထမတဆင့်က ကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (Initial Democratization) (သို့မဟုတ်) political liberalization အဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့်က ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ် ခိုင်မာလာအောင် တည်ဆောက်ခြင်း (Democratic consolidation) ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယလှိုင်း ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းလုံးကြီးနဲ့ အတူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေ စတင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးဆဲ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ စစ်အုပ်စုတို့က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဖော်ဆောင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲ (authoritarian election) ကိုသာ ကျင်းပခဲ့တာကြောင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုရဲ့ ပထမအဆင့်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင်စနစ် (electoral authoritarianism) ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုသာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကို စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် ကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ်ခိုင်မာလာအောင် တည်ဆောက်မှု ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ ထင်ရှားလာပါတယ်။ ဒီလိုကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် အတိုက်အခံဦးဆောင်တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရ (opposition-led provisional government)၊ ပါဝါခွဲဝေယူသော ကြားဖြတ်အစိုးရ (power-sharing interim government) နိုင်ငံတကာကြားဖြတ်အစိုးရ (international interim government) နဲ့ အာဏာရှင်ဦးဆောင် အိမ်စောင့်အစိုးရ (incumbent-led caretaker government) စတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးဟာလဲ လိုအပ်ချက်တရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလို အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လမ်းစဉ်တွေ၊ တွန်းအား (leverage) တွေ အများအပြား လိုအပ်ပါတယ်။ အညင်သာဆုံး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုလို့ ကမ္ဘာက သတ်မှတ်ခဲ့ရတဲ့ တောင်အာဖရိက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်မှာတောင် normative leverage နဲ့ coercive leverage တွေကို အတိုက်အခံတွေဘက်က သုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။ normative leverage ကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအား တမျိုးတည်းနဲ့ မရပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်၊ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ mass rolling actions တွေကို အသုံးပြုပြီး coercive leverage ဖြစ်ထွန်းလာအောင် ဖော်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ စားပွဲပေါ်ရောက်နေတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း coercive leverage ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့က ခဲယဉ်းကောင်း ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ coercive leverage ကို အကောင်အထည်ဖော်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို တိုက်ရိုက်ဝန်းရံပေးမှု မဟုတ်တဲ့ သွယ်ဝိုက်ဝန်းရံပေးမှုကို ပြုလုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကြားဖြတ်အစိုးရကတော့ တရုတ်နဲ့ အနောက်အုပ်စုတွေအကြား တတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်လာမချင်း ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါဘူး။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ မဟာဗျူဟာအချက်အချာကျနေရာ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention) ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် တရုတ်တပ်၊ အိန္ဒိယတပ်၊ ပြင်သစ်တပ်၊ အမေရိကန်တပ်၊ ယူကေတပ်ပေါင်းစုံ ၀င်လာပြီး၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အချက်အချာ ဒေသတွေကို လုကြရင်း ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ရင်လဲ ကိုးရီးယားလို proxy war ဖြစ်ပြီး၊ မြောက်မြန်မာနဲ့ တောင်မြန်မာ ကွဲထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Iraq Dilemma လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်တပ်တွေ အီရတ်ကို ၀င်လာသလို ၀င်လာပြီး ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်ပေးတော့မယောင်ယောင် စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကို အမြစ်ကလှန်ပြီး ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ မလွဲမသွေ လိုအပ်လှပါတယ်။
အတိုက်အခံ ဦးဆောင်တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရနဲ့ ပါဝါရှယ်ယာ ကြားဖြတ်အစိုးရတို့ဟာ coercive leverage နဲ့ normative leverage ကို ဟန်ချက်ညီ ပေါင်းစပ်အသုံးမပြုပဲ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး တောင်အာဖရိကမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ဦးဆောင်သော အိမ်စောင့်အစိုးရ (incumbent-led caretaker government) ကနေတဆင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာတောင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Sharpeville Massacre၊ မင်ဒဲလားဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ military wing ဖြစ်တဲ့ Umkhonto we Sizwe (in Zulu means “Spear of the Nation”) ၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် The Soweto uprising၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Mass Democratic Movement (MDM) စတဲ့ coercive leverage တွေက အခန်းကဏ္ဍတခုကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေဆဲကာလမှာတောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲပေါ်မှာ de Klerk တို့ဘက်က သဘောထား ပျော့ပျောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ရွေးလာစေဖို့ တွန်းအားအနေနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်ပြီး coercive leverage ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးကို မြေပေါ်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ရေး၊ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု၊ မြေအောက်ယူဂျီလှုပ်ရှားမှု၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး၊ လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှု စတဲ့ မိမိတို့အားသန်ရာ လမ်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိတာကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ နှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကို နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကသာ ကယ်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ရှိလာဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး (National Unity) ပါပဲ။ ဒီ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (National Reconciliation) ကိုဖော်ဆောင်ပြီးမှ တည်ဆောက်ယူလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုလဲ ဒိုင်ယာလော့ခ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဖော်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ၊ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေနဲ့ စစ်တပ် အကြားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးတွေကအစ ညီလာခံကြီးတွေအထိ အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်စဉ် (National Reconciliation Process) ထဲမှာ ကြိုးပမ်းမှု အဆင့်ဆင့်တွေ ကနေတဆင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အုတ်မြစ်ချနိုင်တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ဖြစ်လာအောင် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဒိုင်ယာလော့ခ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာက အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ (Interim Government) အသွင်တမျိုးမျိုး မပေါ်ထွက်လာပဲနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးဟာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက်သာမက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်ပါ အရေးကြီးပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၀ါ) အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ၀န်းရံပေးမှုမှာ အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေအပြင် အသွင်ကူးပြောင်းကာလ တရားမျှတမှု (transitional justice) ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် ကြိုတင်လေ့လာ ပြင်ဆင်ချက်တွေ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကော်မရှင် (National Unity and Reconciliation Commission) အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရာမှာ လိုအပ်မယ့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်အတွက် capacity building လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ပဋိပက္ခနှောင်းပိုင်းကာလ အခြေအနေ (post- conflict situations) မှာ ကြုံရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲ စတာတွေကို ကြိုတင်လေ့လာချက်တွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေအကြားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ဆိုတာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်တခုပဲ ဖြစ်ပြီး၊ ပဋိပက္ခတွေ ရဲ့ ဂယက်တွေကို ခါးစီးခံခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး အကြားမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ အမျိုးသမီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ဥပဒေ၀န်ထမ်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပညာရှင်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ စပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အများကြီး ရှိတာကြောင့် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို လူထုအကြားမှာ ပညာပေးဖြန့်ဖြူးမှုတွေ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာကို ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှုလို့ ပညာရှင် ချိန်ဘာစ် ဆိုသူက အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မား လာတာ၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာတာ၊ ပညာရေးတိုးတက်မြင့်မားလာတာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာတာ စတာတွေ အားလုံးကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာမှာ ပညာရှင်တွေက အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ထပ်ခွဲပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ပထမအပိုင်းက ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယပိုင်းက လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာ အခြေတည်တဲ့ တိုးတက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု ဆိုတာက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာကဏ္ဍတွေမှာ သမရိုးကျ နည်းပညာတွေကနေ သိပ္ပံနည်းကျ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာ ဘိုးဘွားအစဉ်အလာအတိုင်း စိုက်ပျိုးမှုတွေကနေ ဈေးကွက်ရှိတဲ့ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းတွေကို ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးလာခြင်း၊ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်မှုတွေကနေ စက်မှုနည်းပညာကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာခြင်း၊ မြို့ပြလူနေမှု အဆောက်အအုံကို ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာ အခြေတည်တဲ့ တိုးတက်မှုဆိုတာကတော့ ဒီလိုထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကနေ အစပျိုး စဉ်းစားတာ မဟုတ်ပဲ လူတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စတင်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားလိုအပ်ချက်ကို အခြေပြုတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာကို ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်တာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာတာတွေလောက်နဲ့ပဲ တိုင်းတာလို့ မရပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသင့်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ လူအများစုဟာ စားသောက်နေထိုင်ရေး လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ စွမ်းအားတွေ ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပြီး လူသားတိုင်းမှာ တန်းတူညီမျှမှုရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဆိုရာမှာလဲ နိုင်ငံရေးအရရော၊ စီးပွားရေးအရရော ကိုယ့်ကြမ္မာ၊ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပညာရေးအဆင့်အတန်းတွေလဲ တိုးတက်မြင့်မားပြီး အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ ဘေးဒဏ်ကနေ ကင်းဝေးတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီလို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး၊ လူသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ အခြေတည်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာဖို့အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူငယ်ထုစွမ်းအား တိုးတက်မြင့်မားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ စာပေ၊ ဂီတအနုပညာ၊ အမျိုးသမီးအရေး စတဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တနိုင်တပိုင် ကျွမ်းကျင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်လဲ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက် တွေကို ၀န်းရံပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေလို့ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ကိုက်ညီတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဦးတည်ချက်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် တူညီသော ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ မတူညီသော်လည်း လိုအပ်သော လမ်းစဉ်များဖြင့် အားဖြည့်ခြင်း၊ တိုင်းနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်လေ့လာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေ ပညာပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင်အား ၀န်းရံကြပါစို့ဟု ရေးသား တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၄၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 10:41 PM ,0comments
၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ စနေနေ့“မဇ္ဈိမ” ထဲမှာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ “ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းတို့ခေတ်က အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကြတာလဲ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘိုဘို ကျော်ငြိမ်းကသာကြာနေ့၊ဒီဇင်ဘာ(၁ဝရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ရေးထားတာပါ။
“ကျနော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်ချင်စိတ်ရှိကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူရဲ ကောင်းမျှော်တဲ့ (မင်း) လောင်းမျှော်တဲ့အကျင့်ကလေးဟာလဲ တွယ်ကပ်ပါလာကြ ပြန်တယ်။ ဒီ (စိတ်) ဒီအကျင့်စရိုက်တွေကြောင့် လူအများဟာ ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးချင် တဲ့စိတ်တွေ နည်းပါး လာကြပြီး၊ စကြာဝတေးမင်း မြင်းပျံစီးပြီးလာကယ်မယ့်နေ့ကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေကြတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်က လွတ်မြောက်အောင် (ငါ) တို့ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေလိုအပ်တယ်၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုဗျူဟာနဲ့ အနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတာ တွေကို စိတ်မဝင်စားကြဘူး။”လို့ အစချီပြီး ရေးထားရင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်က မျိုးချစ်တော် လှန်ရေးသမားတွေ ဘာ့ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးကို အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ် ပြရင်း “ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှု” တို့ “ကျောင်းသားသမဂ္ဂ”၊ “စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု” ၊ “မှတ်သားစရာနဲ့ သုံးသပ်မှု” - စတဲ့စတဲ့ ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေနဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြသွားရာမှာ၊ ဒီ ဆောင်းပါးထဲမှာ “ဦးကျော်ငြိမ်း” ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကိုလဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးနု၊ ဦးရာ ရှစ်၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ဂိုရှယ်-စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အလျဉ်း သင့်သလို တွဲဆက်ယှဉ်စပ်ပြသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဦးပေါ်ဦးလျှောက်ထုံး” တွေထဲက ဘိုးတော်ဘုရားနန်းတော်တည်ဖို့မှာ “ကျွန်းသစ်”ကိုပါ စေချင်တဲ့ ဦးပေါ်ဦးက၊ ဘိုးတော်ဘုရားရဲ့“ပိတောက်နဲ့ မကောင်းဘူးလား” “ပျဉ်းကတိုးနဲ့ မ ကောင်းဘူးလား” ဆိုတဲ့ အမေးတွေကို “ပိတောက်နဲ့လဲ ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်းလဲ ကောင်းပါ တယ်” “ပျဉ်းကတိုးလဲ ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်းလဲကောင်းပါတယ်” လို့၊ အမြဲလိုလို သူပါစေ ချင်တဲ့ “ကျွန်း” ကို တွဲတွဲပြောသွားလေ့ရှိတဲ့ ဦးပေါ်ဦးလျှောက်ထုံးကို သွားပြီးအမှတ်ရမိချင် စရာပါပဲ။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာလဲ ခေသူမဟုတ်ဆိုတာ၊ မူကိုအလေးထားတတ် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လေးစားတတ်၊ စာအင်မတန်ဖတ်၊ အသိဥာဏ်အား မြင့်မားသူတ ယောက်ဆိုတာကို ပေါ်လွင် အောင်ရေးသားပြသွားတာလက်ကနဲလက်ကနတွေ့လိုကရပါတယ်။
သူ့ဆောင်းပါးအပေါ် လက်ခံကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူလဲ ရှိမယ်။ မကြိုက်တဲ့သူ လက်မခံတဲ့ လူလဲ ရှိမယ်။ ဒါ သဘာဝပါပဲ။ လွတ်လပ်စွာ ခံယူနှစ်သက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲ လွဲပိုင်ခွင့်အရ ၊ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ သူ့သဘောသူဆောင်လိမ့်မယ်လို့ပဲ သဘောထားပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် ကနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေရမှာမျိုး မလုပ်ချင်ပါဘူး။ “အဓိက ပျောက်” “ပစ်ကွင်းပျောက်” ပြီး “အမြှုပ်ထပလုံစီရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေ” မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ…
သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ကျနော်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်နေလေတော့၊ ပြန် လည်ရှင်းလင်းပြမှုမလုပ်ရင် အဓိပ္ပါယ်တမျိုးပေါက်စေနိုင်တဲ့အတွက် လိုအပ်သလောက်ပဲ ကျ နော်ပြန်လည်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေကိုပဲ ဖေါ် ပြရှင်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်သလို လက်ခံသုံးသပ် သွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေကတော့၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ဟောဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်…
ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ လူထုဒေါ်အမာနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သော်လဲ ရာဇဝင်အချက် အလက်ကိုရေးရာမှာ အာဃာတမရှိ အမှန်အတိုင်းရေးပြခဲ့တယ်။ (မူ) principle ကို အလေး ထားတာကတကြောင်း၊ self-respect ဟုခေါ်သော မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လေးစားတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အသိဥာဏ်စွမ်းအားနဲသော လက်ဝဲတယူသန်အချို့သည် ဦးကျော်ငြိမ်းကို မုန်း တာနဲ့ရာဇဝင်အချက်တွေကိုပါပြင်ချင်ကြတယ်။
ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာ တိုင်းတွေခွဲကြတော့၊ တိုင်း (၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်းမှူး၊ ဦးကျော် ငြိမ်းက နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ခွဲဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ( သခင်တင်မြ ၏ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ဌာနချုပ်နှင့်တိုင်း(၁ဝ)တိုင်း-စာမျက်နှာ၄၄)
သို့သော် ဝင်းတင့်ထွန်းရဲ့ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်မှာ “ဦးဗဆွေ ဦးကျော်ငြိမ်း သည် ရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်” လို့ သမိုင်းကို လိမ်ညာရေးခဲ့တယ်၊ (စာမျက်နှာ ၃၅)။ ကျနော် မှတ်မိသလောက် ကွန်မြူနစ်တွေ ပြုစုထုတ်ဝေတဲ့ (လွတ်လပ်ရေးရွှေရတုသဘင်) စာအုပ် မှာလည်းဤနည်းတူရေးသားခဲ့ကြတယ်။
ပိုဆိုးတာက ဝင်းတင့်ထွန်းက (စာမျက်နှာ ၃၅ မှာပဲ) “စစ်တိုင်းများ၏ နိုင်ငံရေးမှူးများမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်း ဖြစ်သည်” လို့လိုရာဆွဲကောက်ချက်ချပြန်တယ်။ ဒီတုန်းက သခင်ချစ် ဟာ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ စစ်ပြီးနောက် ကွန်မြူနစ် ပါတီထောင်မှ ကွန်မြူနစ်ဘက် ပါသွားသူဖြစ်တယ်။ ဒီလို ရာဇဝင်အချက်အလက်ကို လိမ်ပြီး ကိုယ်လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ချတာတာဝန်မဲ့ရေးသားချက်သာဖြစ်တယ်။
ဝင်းတင့်ထွန်းက ဦးကျော်ငြိမ်းတယောက်ကိုသာ ကွန်မြူနစ်အမျက်၊ကွန်မြူနစ်အငြိုးနဲ့ ရာဇ ဝင်အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်တင်ပြခဲ့တာမဟုတ်။ ဖတပလ (ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေး) အဖွဲ့ကြီးကိုဖွဲ့ကြတော့ အဓိကအင်အားဖြစ်တဲ့၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့အရေး တော်ပုံပါတီနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် (၃) ဦးစီ၊ ပေါင်း (၉) ဦးပါပြီး ဗဟိုဦး စီးအဖွဲ့နဲ့စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့တာပါ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်တင်မြ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီမှ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဗဆွေ၊ သခင်ချစ် ၊ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်လက်ျာ ၊ ဗိုလ်နေဝင်း တို့ဖြစ်ကြပါ တယ်။ ( သခင်တင်မြ ရဲ့ ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးဌာနချုပ်နှင့်တိုင်း(၁ဝ)တိုင်း-စာမျက်နှာ၎ဝ)၊
ဤအချက်ကို ရာဇဝင်စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း သိကြပါသည်။ သိသင့်ပါသည်။ စာအုပ်ပေါင်း မြောက်များစွာတွင်လည်း ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အရေးပါသော ရာဇဝင်အချက်တ ချက်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ ဝင်းတင့်ထွန်းဟာ သခင်တင်မြကို ကြည့်မရ၍သော်လည်းကောင်း၊ သခင်ဗဟိန်း ကို ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သခင်တင်မြအစား သခင်ဗဟိန်းကို ကွန်မြူနစ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဝင်းတင့်ထွန်း စာအုပ်စာမျက်နှာ ၃၂ ကိုကြည့်ပါ) ဒီလို ရာဇဝင်ကိုရေးရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာကို တကယ့်အဖြစ်မှန်နဲ့ အစားထိုး လို့မရသလို၊ လိုရာကိုဖြစ်သလိုမရေးကောင်းပါ။
အဲဒီတော့ ချုပ်လိုက်ရင် ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ ကျနော့်စာအုပ် “အမှောင်ကြားကဗမာပြည်” စာအုပ်ကိုဖေါ်ပြပြီး ကျနော့်အပေါ် ရေးသားထားချက်ဟာ အဓိကအားဖြင့် အချက် (၃) ချက်ရှိ ပါတယ်။
ပထမအချက်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် စစ်တိုင်းတွေခွဲဝေပြီး စစ်တိုင်းမှူး နိုင်ငံ ရေးမှူးတွေခွဲဝေတာဝန်ချထားသတ်မှတ်ရာမှာ၊ တိုင်း (၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်း မှူး၊ ဦးကျော်ငြိမ်းက နိုင်ငံရေးမှူး ဆိုတာ သခင်တင်မြရဲ့ စာအုပ်ကြီးထဲမှာ ပါပါလျက်နဲ့ “ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းသည်ရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်”လို့ဖေါ်ပြထားချက်။
ဒုတိယအချက်က - “စစ်တိုင်းများရဲ့ နိုင်ငံရေးမှူးများ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်း ဖြစ်သည်” လို့ လိုရာဆွဲကောက်ချက်ချထားချက်။
တတိယအချက်က - ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ (၉) ဦးဖွဲ့ရာမှာ သခင် တင်မြအစားသခင်ဗဟိန်းကိုပြောင်းလဲထည့်သွင်းရေးသားထားချက်။
သခင်တင်မြကို ကြည့်မရ၍သော်လည်းကောင်း သခင်ဗဟိန်းကို ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း ပြောင်းပစ်ရေးသားတာဟာ လိုရာကို ဖြစ်သလိုရေးသားထားချက်။
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း စွပ်စွဲထားသလို လိုရာဆွဲကောက်ချက်နဲ့ အကိုးအကားမဲ့၊ အထောက်အ ထားမဲ့ တာဝန်မဲ့ရေးသားထားတာလား။ တချက်ချင်း ကျနော် ပြန်လည်တုန့် ပြန်သွားပါ့ မယ်။ အဲဒီလို မတုန့်ပြန်ခင်မှာ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ပြောမှဖြစ်မှာကတော့၊ “အမှောင်ကြားကဗမာပြည်” စာအုပ်ဟာ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကျေ ညာနိုင်တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်အထိကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကျဉ်းရုံးဖေါ်ပြထား တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပေးထားရုံမက၊ (အနီးခေတ် ဗ မာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအကျဉ်း ၁၉၄၈ - ၂ဝဝဝ ) လို့လဲ ဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ၁၉၄၈ ကနေ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်အထိအတွင်း အနီးခေတ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်း ကိုပဲအကျဉ်းရုံးဖေါ်ပြသွားနိုင်ဖို့ဇောင်းပေးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကို စပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဖွားဖက်တော်လိုဖြစ်ခဲ့ရ တဲ့ “ပြည်တွင်းစစ်” ကို ဖေါ်ကျူးရေးသားရပါတော့မယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဘယ်သူစသလဲ၊ ဘာ့ ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ-ဆိုတာတွေကို ဖေါ်ပြရာမှာ၊ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရှောင် တခင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်၊ အကြောင်းရင်းခံတွေ ရှိကြတယ်၊ အဲဒီ အကြောင်းရင်းခံ တွေကိုလဲ သိမြင်နိုင်ဖို့၊ သမိုင်းနောက်ခံကားချပ်တွေနဲ့ ယှဉ်တွဲ ဆက် စပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်-ဆိုပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မတိုင်ခင် (၁ဝ) နှစ်တာလောက်အကြောင်းကို မလွှဲမရှောင်သာ နောက်ခံ ကားချပ်ကိုဖေါ်ပြခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၄၈-၂ဝဝဝ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းတခုလုံးကိုတောင် အကျဉ်းအဖြစ်ပဲ ရေးသားခဲ့ ရာမှာ၊ အဲဒီရဲ့ အဦးအစဖြစ်တဲ့ နောက်ခံကားချပ် (၁ဝ) နှစ်တာဟာ အကျဉ်းရဲ့အကျဉ်း သဖွယ်ပဲချုပ် ပြီးရေးသားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ ကျနော်နဲ့ပတ် သက်ပြီး ရေးသားထား ချက်များဟာ အဲဒီအကျဉ်းထဲကမှ “ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး” နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲက အချက် (၃) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းရဲ့ အကျဉ်းထဲ ကမှ တခန်းတဏ္ဍပါ အချက် (၃) ချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် အကျဉ်းဆုံး အကျဉ်းရုံး ဖေါ်ပြထားချက်တွေထဲက အတိုချုပ်ပြီးရေးထား တာဖြစ်ပေမဲ့၊တချက်ချင်းကျနော်ပြန်လည်ရှင်းလင်းသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံးအချက်၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တိုင်း(၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်း မှူး၊ နိုင်ငံရေးမှူးက ဦးကျော်ငြိမ်း-လို့ သခင်တင်မြရဲ့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဌာနချုပ် နှင့် တိုင်း (၁ဝ)တိုင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါလျက်နဲ့ ကျနော်က “ဦးဗဆွေနဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းက ရန်ကုန် တာဝန်ခံ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ဘာ့ကြောင့်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တာလဲ။
ကျနော်က အမှန်ကိုပဲ ဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ စာရင်းထဲသာပါခဲ့ပြီး၊ အမှန်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွင်း ဘယ်စစ်တိုင်းကိုမှ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ပါပဲ။ ဘိုဘိုကျော် ငြိမ်းက သခင်တင်မြရဲ့ စာအုပ်ထဲကကို ကိုးကားပြခဲ့ပြီး၊ ကျနော်က သခင်တင်မြစာအုပ်ကို ကိုးကားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်မှူး ချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ရေးသားဖေါ်ပြချက်တွေကိုအဓိကထားကိုးကားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောက…
“ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ဘယ်စစ်တိုင်း ဘယ်နေရာကိုမှ တာဝန်မ ယူခဲ့၊ ပထမတိုင်း (၄) နိုင်ငံရေးမှူးတာဝန်လျာထားရာကိုလဲ မသွား၊ နောက် တိုင်း (၆) နိုင်ငံရေး မှူးတာဝန်ကိုလဲ သွားမယူဘဲ၊ တနေရာ လုံခြုံရာတွင် မိမိဘာသာ ပုန်းခိုနေပြီး၊ ရန်ကုန်မှ ဂျပန် တပ်များဆုတ်ခွါပြီးတော့မှ ရန်ကုန်တိုင်း ကိုဗဆွေထံ သွားပူးပေါင်း နေခဲ့သည်။” လို့ဖေါ်ပြခဲ့ တာရှိပါတယ်။
မှတ်ချက် (၂) ဆိုပြီးဖေါ်ပြရာမှာ၊ တိုင်း (၆) တာဝန်ကျသော ဦးကျော်ငြိမ်းကို တိုင်း (၆) မပို့တော့ပဲ၊ ရန်ကုန်တွင် ကိုဗဆွေနှင့် တွဲဖက်တာဝန်ပေးသည်။ လို့လဲ ရေးသားထားတာ ရှိပါတယ်။ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္တုပ္ပတ္တိ - စာမျက်နှာ ၈ဝ) ကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချက်အလက်တွေကြောင့် ကျနော်က “ဦးဗဆွေနဲ့ ဦး ကျော်ငြိမ်း ကရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးသားတာပါ။
ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ ဖေါ်ပြထားချက်၊ မှတ်ချက် (၄) ဆိုတာမှာဆိုလျှင်- ၁၉၅၂ ခုနှစ် က အင်္ဂလန် လန်ဒန်မြို့မှာ လှည့်လည်လေ့လာရေးအဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ အတူခရီးသွားရစဉ် ကျနော် (ဗိုလ်ကျော်ဇော) ဦးစီးတဲ့ တိုင်း (၄) ကို ဦးကျော်ငြိမ်း ပထမနိုင်ငံရေးမှူးတာဝန် ကျတာကို ဘာ့ ကြောင့်မလာသလဲလို့ မေးကြည့်ရာမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ခင်ဗျားကြီးကိုကြောက်လို့ မလာတာ လို့ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲဖြေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတောင်ရေးသားထားပါတယ်။
“အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျနော်တို့က ဂျပန်ကို ဖိတိုက်ရင် ဂျပန်က ကျနော်တို့ကို ပြန်တိုက်မည်။ ထိုဒဏ်ကို သူမခံနိုင်လို့မလာသည့်သဘော ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ အနာမခံလိုသော နိုင်ငံရေးအချောင်သမားကြီးဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်ပေသည်။” လို့တောင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်းဖေါ်ပြ ထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္တုပ္ပတ္တိ-စာမျက်နှာ-၈၁) ထဲမှာပဲတဆက်တစပ်တည်းဖတ်ရှု့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမုန်းကိုသာ အဓိက ထား ရေးရမယ်ဆိုရင်-အဲဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုပါ ကျနော် ရှာဖွေရေးထည့်လိုက်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။အခုကျနော်အတိုချုပ်ပဲရေးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်၊ “စစ်တိုင်းများရဲ့ နိုင်ငံရေးမှူးများက ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်းဖြစ်သည်” လို့ ရေးသားချက်၊ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ချထားချက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ ကျနော်ရှင်းပြနိုင် ပါတယ်။ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ အတိုချုပ်ပြီး ရေးခဲ့ တာအမှန်ကအဲဒီစာမျက်နှာ(၃၅)မှာ…
“စစ်တိုင်းများရဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းဖြစ်ပြီး၊ စစ် ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာ့တပ်မတော်ကချည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းအလိုက် နိုင်ငံရေးခေါင်း ဆောင်တွေဟာ သခင်စိုး၊ သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်ချစ်၊ သခင်ဗသိန်းတင်၊ သခင် တင်ထွန်း၊ သခင် တင်မြ၊ ကိုစံညွန့်တို့ဖြစ်ကြပြီး စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်မောင် မောင်၊ ဗိုလ်စောကြာဒိုး၊ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်ကျော်ဇော၊ ဗိုလ်တင်ထွန်း။ ဗိုလ်ရဲထွတ်၊ ဗိုလ်မှူး အောင်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူး၊ ဗိုလ်ခင်ညို တို့ဖြစ်ပြီး တိုင်း(၂) တိုင်း (၄)ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ က ဗိုလ်လက်ျာဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးခဲ့တာပါ။အဲဒီတော့…
အဲဒီနိုင်ငံရေးမှူးတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးဟာ သခင်ချစ်ကလွဲပြီး အဲဒီတုန်းက ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းမဟုတ်လား။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ကပ်လုံးထောက်လုံးအဖြစ်ထောက်ပြ ချင်တဲ့ သခင်ချစ် ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ပြန်ကြည့်ပါ။ အဲဒီလို တာဝန်ခွဲကြတဲ့ မတ်လဆန်းက အထိပဲ “ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ” ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ဖြစ်နေပြီး၊ မေလဆန်း ကွန်မြူနစ်ပါတီဌာန ချုပ် ဗားကရာမှာ ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်အဖြစ် အတိအလင်း ပြောင်း လဲဖေါ်ပြလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ သေတဲ့အထိလဲ ကွန်မြူနစ်ကြီးအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ဖေါ်ပြသွားခဲ့ပြီး တပါတီလုံးရဲ့ အတွင်းရေးမှူးကြီးအဖြစ် နဲ့တောင် ရပ်တည်ဖေါ်ပြသွားခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် အတိုချုပ်အဖြစ် ကွန်မြူနစ် ပါတီကချည်းလို့ဖေါ်ပြခဲ့မိတာဟာ ဘိုဘို ကျော်ငြိမ်းပြောသလို ကြီးကျယ်တဲ့ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ကြီးပါလား။ နိုင်ငံရေးမှူးတွေထဲမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဘယ်မှမသွား၊ သခင်ချစ်ကလွဲလို့ ကျန်နိုင်ငံရေးမှူးတွေအားလုံးဟာ ကွန်မြူနစ် တွေချည်းဖြစ်နေတော့ (သခင် ချစ်တောင် မကြာမတင်အတွင်း ကွန်မြူနစ်အဖြစ်တိတိလင်း လင်းခံယူလိုက်တော့)၊ ဒါ အတော်ကြီးကျယ်တဲ့ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ကြီးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား။
တတိယအချက်၊ ဖတပလ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ (၉) ဦးမှာ သခင်တင်မြအစား သခင်ဗဟိန်းကို ကွန်မြူနစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းပစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်၊ ဝင်းတင့်ထွန်းဟာ သခင် တင်မြကို ကြည့်မရ၍သော်၎င်း၊ သခင်ဗဟိန်းကို ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်သော်၎င်း၊ သခင် တင်မြ အစား သခင်ဗဟိန်းကို အစားထိုးပြောင်းပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာလဲ ကျနော် ရှင်းလင်းပြ နိုင်ပါတယ်။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သူ့အတ္တနော်မတိနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ သခင်တင်မြရဲ့ “တိုင်းကြီး (၁ဝ)တိုင်း”ကိုပဲကိုင်ပြီးတဖက်သတ်ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ် … ကျနော် သခင်ဗဟိန်းကို ကြည်ညိုတယ်ဆိုတာ၊ သခင်တင်မြကို ကြည့် မရဘူး မကြိုက်ဘူးဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဦးကျော်ငြိမ်းကိုလဲ ကျနော် မကြိုက်တာ အမှန်ပါ ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုကြောင့် အဲဒီအချက်တွေကိုကိုင်စွဲပြီး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ သခင်တင် မြစာအုပ်ကိုလဲ ကျနော် မကိုးကားခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်ရဲ့ ရေးသားချက်အတွက် ကျနော်ကိုး ကားခဲ့တဲ့ “ကျမ်းကိုးစာရင်း”ကိုလဲ စာအုပ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားရာမှာ၊ သခင်တင်
မြရဲ့ အဲဒီတိုင်းကြီး (၁ဝ) တိုင်း မပါပါဘူး။ အဲဒီ အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ကိုးကား ခဲ့တာက သခင်ကြီးတွေစုစုပေါင်း ရာဂဏန်းလောက်ပါဝင်ပြီး အဆင့်ဆင့်သော ကော်မီ တီတွေဖွဲ့ပြီး အထပ်ထပ်ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ “တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့” က ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း”ပါအချက်အလက်အရရေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းကြီးဟာ ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲ နှစ်တွဲရှိပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဦးကျော်ငြိမ်းလဲ မသေသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဦးသိန်းဖေ မြင့်လဲ ရှိနေသေးရုံမက အဲဒီသမိုင်း ပြုစုရေးအဖွဲ့ထဲက တနေရာမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့က သခင်သိန်းဖေ၊ သခင် သိန်းမောင်ကြီးတို့သာမက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သခင်ကြီးတွေလဲ တော်တော်ပါပါတယ်။ အဲဒီ “ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးသမိုင်း” ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၅၈ဝ) မှာ “မြေအောက် ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့စည်းခြင်း”ဆိုတဲ့အခန်းမှာဟောဒီလိုရေးထားပါတယ်။…
“ပထမဆုံး လျှို့ဝှက်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင် ဗမာ့တပ်မတော်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးစီ ပါဝင်ကြသည်။ ပထမဆုံး ဖက် ဆစ်တိုက် ဖျက်ရေးပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များမှာ-
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ၂။ ဗိုလ်လက်ျာ၊ ၃။ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ၄။ သခင်စိုး၊ ၅။ သခင်ဗဟိန်း၊ ၆။ သခင်သန်းထွန်း၊ ၇။ ကိုကျော်ငြိမ်း၊ ၈။ ကိုဗဆွေ၊ ၉။ သခင်ချစ်-တို့ ဖြစ်ကြသည်။”
အဲဒီတုန်းက သခင်တင်မြတို့လဲ မဆလမှာလား ဘယ်မှာလဲမသိ၊ နေရာကောင်းကောင်း ရပြီး အပြင်မှာ ရှိနေသေးတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပါ။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် သောင်းနဲ့ ချီထုတ် ဝေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာ အချက်အလက်မှားနေတယ်လို့လဲ ပြောသံထွက်လာတာ မကြားခဲ့ရ ဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သခင်တင်မြတယောက်တည်းရေးတာထက်၊ သခင်တွေ ရာနဲ့ချီရေးထား တဲ့ အဲဒီစာအုပ်ပါအချက်အလက်ကို ကျနော်ကိုးကားရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်သလို၊ အဲဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ကိုးကားမိခဲ့တဲ့ အထောက်အထား စာ အုပ်တအုပ်လဲ ရှိပါသေးတယ်။
တက္ကသိုလ်များသမိုင်းသုတေသနဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြဟန် ရဲ့ “ကိုလိုနီ ခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓါန်” စာအုပ်ပါ။ ၁၉၈၁ က ပထမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၉ မှာ တတိယအကြိမ် ထပ်ထုတ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့အမှာ ရေးသား ထားကြတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အဲဒီ “မြဟန်” ရဲ့ “ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓါန်” ထဲမှာလဲ စာမျက်နှာ(၁ဝ၄) မှာ၊ “ဖတပလ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစည်းနဲ့ သီးသန့် ဖေါ်ပြထားရာမှာ ဟောဒီလို ရေးသားထားပါတယ်။
၁။ သခင်စိုး၊ ၂။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ၃။ သခင်သန်းထွန်း၊ ၄။ ကိုဗဟိန်း၊ ၅။ဗိုလ်လက်ျာ၊ ၆။ ဗိုလ်နေဝင်း၊၇။သခင်ချစ်၊၈။ကိုဗဆွေ၊၉။ကိုကျော်ငြိမ်းဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အဲဒီစာအုပ် နှစ်အုပ်ပါ အချက်အလက်ကို အထောက်အထားပြုပြီး၊ ကျနော့်ရဲ့ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်မှာ အဲဒီအချက်အလက်ကို ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းထင်သလိုသခင်တင်မြကိုကြည့်မရလို့ မလိုတမာပြောင်းလဲရေးသားခဲ့ခြင်း မ ဟုတ်ပါ။ အဲဒီစာအုပ် (၂) အုပ်ကိုလဲ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ရှာဖွေတိုက်ဆိုင် ဖတ်ရှု့ကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့် မယ်။
သမိုင်းကိုရေးကြတဲ့အခါမှာ၊ သမိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိစ္စတွေဟာ များသောအား ဖြင့် ကျနော်တို့ မမီ မတွေ့လိုက်ရဖူးတဲ့ကိစ္စတွေက အများစုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အကိုးအ ကားပြု ရေးသားကြတဲ့အခါမှာ ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျနော့်စာအုပ်မှာ ကျနော် မှီငြမ်းကိုး ကားခဲ့တဲ့ “ကျမ်းကိုး” စာရင်းကိုလဲ ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမှာစာမှာလဲ “ချွတ်ယွင်းမှု၊ တိမ်းစောင်းမှု၊ လစ်ဟာလိုအပ်မှုများအပေါ်ဝေဖန်အကြံပေးကြမှုမှန်သမျှလေးစားစွာကြိုဆိုရင်း၊ နောင် ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ကြိုးပမ်းဖြည့်ဆည်းသွားပါ့မယ်၊” လို့ ရိုး ရိုးသားသား ပန်ကြားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းဆိုတာ ညာလို့မရသလို၊ ညှာလို့လဲမရပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ အဓိကပစ်ကွင်း မှေးမှိန်သွား စေနိုင်မယ့် အငြင်းအခုန်မျိုးတွေ မလုပ်ချင်ပါဒါလောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
၁၂- ၁၂- ၂ဝ၁ဝ
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 10:48 PM , 1 comments
တော်လှန်ရေးတရပ် ဆင်နွှဲရာမှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲဖို့အတွက် တော်လှန်ရေးသမားတွေ စုစည်းမိလာ ကြတဲ့အခါ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်နဲ့ စုဖွဲ့ပြင်ဆင်မှာလဲ ဆိုတာက မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါတယ်။ လူအများကို အခြေပြုတဲ့ (Mass-based Revolutionary Organization) အနေနဲ့ စုဖွဲ့မှာလား၊ ထိပ်ပိုင်းက လူအနည်းစုကို အခြေပြုတဲ့ (Elite-based Revolutionary Organization) အနေနဲ့ စုဖွဲ့မှာလား၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ် (Centralization) ကို အခြေခံမှာလား၊ ဗဟိုဦးစီးမှုဖြေလျှော့ထားသောစနစ် (Decentralization) ကို အခြေခံမှာလား ဆိုတဲ့ စဉ်းစားရွေးချယ်စရာ အချက်အလက်တွေ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ centralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးမှာလား၊ decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးမှာလား ဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုချမှတ်လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ လူတ ယောက်ကပဲ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးချမှတ်မယ်ဆိုရင် centralization စနစ် ကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ လူအယောက် (၁၀၀၀) ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးက လူအယောက် (၁၀၀၀) လုံးက ညီတူညာတူဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ သာမန်အဖွဲ့ဝင်တွေက လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့နဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ် တွေက ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုကို ချမှတ်ပြီး၊ ဗဟိုအမှုဆောင်များက အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်အချို့ကို ချမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ centralization- decentralization continuum ရဲ့ အလယ်အလတ် စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရေးရာ လေ့လာဆန်းစစ်သူ Jennergren က decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲ decentralized လုံးဝမလုပ်တဲ့ အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိသေးကြောင်း ညွှန်းဆိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက် များ (important decisions) တွေထဲမှာ အဖွဲ့အစည်းရေးရာဦးတည်ချက်များ (Organizational Objectives)၊ မဟာဗျူဟာ စီမံချက်များ (Strategic Plans) နဲ့ အခြေခံမူ ၀ါဒများ (Basic Policies) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကက အဖွဲ့အစည်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရေးရာ လေ့လာသူ Mintzberg က ဘဏ္ဍာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အများအားဖြင့် ထိပ်ပိုင်းခါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိပြီး၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အလယ်အလတ်ခေါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ်ချက် ချလေ့ ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ centralized decisions တွေ ရှိနိုင်သလို decentralized decisions တွေလဲ ရှိနိုင်ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားလှပါတယ်။ centralization နဲ့ decentralization စနစ်တွေကိုပဲ သီးခြား ကျင့်သုံးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါးလှပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောသဘာဝ ပေါ်မူတည်ပြီး degree of decentralization ကတော့ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
decentralization ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုတွေမှာ အခြေခံပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု အတွက် သတင်းအချက်အလက်ဟာ အရေးပါလာတဲ့အခါမှာ အိုင်အက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်စနစ် (Information System) ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလဲ degree of decentralization အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိလာပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ အိုင်အက်စ် စနစ်နဲ့ centralization/ decentralization တို့အကြားက ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုကို ပညာရှင် တွေက ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမတချက်အနေနဲ့ အိုင်အက်စ်စနစ်ဟာ ဆုံးဖြတ် ချက်တွေချမှတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိနိုင်စေတဲ့ အတွက် centralization ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားတဘက်မှာလဲ အိုင်အက်စ်စနစ် ဟာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်တိုင်းကို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြည့် ပြည့်စုံစုံ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အောက် ခြေအဆင့်ဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခွင့်တွေ ပေးအပ်နိုင်ပြီး decentralization ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မတရားတဲ့ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖြိုလှဲဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြတဲ့ political entrepreneurs တွေအနေနဲ့ အိုင်အက်စ်စနစ်ကို သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များကို ထောက်ပြပြောဆိုကြ ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုထိရောက်ပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို စိန်ခေါ်နိုင်မှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ တဆင့် တော်လှန်ရေးကွန်ယက်တွေ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းပြီး ကွန်ယက်စစ်ပွဲ (netwar) ကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြောင်း စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေး ပညာရှင် Arquilla နဲ့ Ronfeldt တို့က အကြံပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်တပ်၊ ရဲတွေကို တော်လှန်ရေးအင်အားစုကြီး တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလည်ပတ်မှုတွေကို တိုက်ရိုက် တိုက်ခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကတော့ အာဏာ ရှင်ယန္တရားကို ထောက်ကူပေးတဲ့ ဘဏ်တခုကို လူအင်အားသုံးပြီး ၀င်ရောက်စီးနင်းတိုက် ခိုက်တာထက် ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်ကို တိုက်ခိုက် နိုင်မှုက ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိလာကြောင်း ပြောဆိုလာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ အိုင်တီစနစ်၊ အိုင်အက်စ်စနစ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေး (security of the organization) ကို ထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ကြောင်း ကိုလဲ ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Bell ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ပတ်သက်တဲ့ old wives' tale တခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေး (Security of the organization) နဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ပြီးမြောက် အောင်မြင် အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (efficiency) တို့ အကြားမှာ ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှု (inverse relation) ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လံခြုံရေးဆိုတာက နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားရဲ့ ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းကို တောင့်ခံနိုင်မှုနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Efficiency ဆိုတာကတော့ ချမှတ်ထားတဲ့ စီမံချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတော်လှန်ရေးအဆက်ဆက်ရဲ့ သင်ခန်းစာများအရ Efficiency ကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်မှုများလေလေ၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်လေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာလေ့လာသူ McCormick က တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှုကို လျှော့ချပြီး ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ decentralization process တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း Efficiency ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ အောင်ပွဲကို ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကြာလာခဲ့ရင်တော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်မှု ပိုများလာတာနဲ့အမျှ ပျက်စီးတိမ်ကောသွားနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရေတိုကာ လမှာ Efficiency ရဖို့အတွက် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှုရဲ့ security ကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ sacrifice လုပ်ဖို့သင့်သလဲဆိုတာကို တိုက်ပွဲဖော်ဆောင် လှုပ်ရှားမှု သဏ္ဍာန်တိုင်းမှာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ မြေအောက်ဆဲလ်တွေအပေါ်မှာ အခြေခံတည်ဆောက်မှု သဏ္ဍာန် (hierarchical cell-based organization) ကနေ ကွန်ယက်သဏ္ဍာန် (network structures) ကို ကူးပြောင်းမှု လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ efficiency နဲ့ ညီမျှတဲ့ security ကို တပြိုင်တည်း တိုးမြှင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Network structures ပေါ် အခြေခံတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာ အဖွဲ့အစည်းငယ်လေးတွေ (nodes) အများအပြား ပါဝင်ပြီး၊ ဒီ nodes တွေအကြားက ဆက်စပ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု (interconnections) တွေလဲ အများအပြား ပါရှိတဲ့အတွက် သတင်းလုံခြုံရေး ရဖို့ဆိုတာကတော့ အလွန်ခဲယဉ်းတတ်ပါတယ်။ Node တခုကို နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဒေါက်တိုင်တွေက ခြေရာခံမိတာနဲ့ Network structure ကြီးတခုလုံးကို ရန်သူက ဖြိုခွင်းနိုင်ဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ် ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် centralization မှာ အားသာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက security ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်မြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်တဲ့ တော်လှန်ရေးအတွက် ပိုပြီး အသုံးဝင်တတ်သလို၊ decentralization မှာ အားသာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက efficiency တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ရေတိုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း အောင်ပွဲရနိုင်မှုအတွက် အသုံးဝင်တတ်ပါတယ်။ သက် ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးရဲ့ ရေတိုရေရှည် အတိမ်အနက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်တွက်ချက် နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ရေရှည်မြှုပ်နှံရမယ့် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအချိန်မှာ ပဲ့ကထောင်၊ ဦးကနင်းနဲ့ ကသောင်းကနင်း decentralization အဖွဲ့အစည်းတွေ မှိုလိုပေါက် လာပြီး၊ ရေတိုကာလအတွင်း အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနွှဲရမယ့် အချိန်မှာကျတော့မှ ဟိုအဖွဲ့ကလဲ နှစ်ယောက်တပိုင်း၊ ဒီအဖွဲ့ကလဲ မချိသာမဆန့်သာနဲ့ မပီမပြင်ထွက်ပေါ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ကြရမှာပဲ။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ elite-based နဲ့ Mass-based organization ကွဲပြားမှု တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ centralization/ decentralization ကွဲပြားမှု သဏ္ဍာန်လိုပါပဲ။ continuum အနေနဲ့သာ ရှိပါတယ်။ ရေပေါ်ဆီအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီး သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်ဖို့ကတော့ အလွန်ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတခု ဟာ elite-based လား၊ mass-based လားဆိုတာကို ပညာရှင်အများစုက အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ တိုင်းတာလေ့ရှိကြပါတယ်။ အလွယ် တကူ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတခုကတော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတခုမှာ ရှိနေတဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဆယ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ရင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ကြံသတ် ဖြတ်လိုက်ရင် ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အောင်ပွဲရနိုင်မှု စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားမှု ရှိမရှိ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို elite-based revolutionary organization လို့ သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တ၀က်ကျော်ကို ချေမှုန်းနိုင်မှ သာ အောင်ပွဲရနိုင်မှုစွမ်းရည် ကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို mass-based revolutionary organization လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတရပ်ဆင်နွှဲရာမှာ ပါဝင်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ elite-based များနေရင် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ဒေါက်တိုင်တွေအနေနဲ့ ဖြိုခွင်းရ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီလိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးဟာလဲ ကြန့်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ Mass-based များ နေရင်တော့ ဖြိုခွင်းရ ခက်ခဲတတ်တာကြောင့် တော်လှန်ရေးဘက်မှာ ပိုပြီး အားသာချက်ရှိ လာနိုင်ပါတယ်။
စစ်ပညာရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ centre of gravity ဟာ ဘယ်မှာတည်ရှိနေလဲဆိုတာကို သိလာတာနဲ့အမျှ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ elite-based, mass-based သဏ္ဍာန်ကို ဆန်းစစ်နိုင်လာပြီး၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အောင်မြင်နိုင် မှုအတိုင်းအတာကို သုံးသပ်မှန်းဆနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရူပဗေဒပညာရပ်မှာ centre of gravity ဆိုတာ ရုပ်ဝတ္တုတခုရဲ့ ရွေ့လျားခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ extraneous forces အားလုံး ဆုံတဲ့ ဆုံမှတ်ကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပညာရှင် ကလော့ဝတ်စ်က စစ်တပ်များ တပ်စွဲနေရာယူမှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ ဒီသဘောတရားကို ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် centre of gravity ဆိုတာ ပါဝါနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အားလုံးတည်မှီနေတဲ့ hub တခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတခုရဲ့ အရှုံးအနိုင်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော၊ အားအကောင်းဆုံးသော တပ်ရင်း၊ တပ်မတွေကို centre of gravity အနေနဲ့ conventional war တွေမှာ သတ်မှတ် လေ့ရှိကြပါတယ်။
ကလော့ဝစ်ရဲ့ strategic doctrine အရ တပ်မှူးတွေဟာ မိမိရဲ့ centre of gravity ကို သိဖို့ လိုအပ်သလို၊ တဘက်ရန်သူရဲ့ centre of gravity ကိုလဲ သိဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ centre of gravity ကိုသာမက နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ centre of gravity ကိုပါ သိဖို့ လိုပါတယ်။ တော်လှန်ရေးရဲ့ centre of gravity ဟာ mass-based မဟုတ်ပဲ elite-based ဖြစ်နေသရွေ့ ကာလပတ်လုံးမှာတော့ အောင်ပွဲနဲ့ ဝေးကွာနေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
ခင်မမမျိုး (၁၇၊ ၈၊ ၂၀၁၀)
Arquilla, J. & Ronfeldt, D. (1997) 'The Advent of Netwar', in 'In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age', Santa Monica: RAND
Bell, J. B. (1989) 'Aspects of the Dragonworld: Covert Communications and the Rebel Ecosystem', International Journal of Intelligence and Counterintelligence,3(1)
Jennergren, L. P. (1981) 'Decentralization in Organizations', in Nystrom, P. & Starbuch, W. (eds.) Handbook of Organizational Design: Volume 2, Remodeling Organizations and their Environments, Oxford, Oxford University Press
McCormick, G. H. (1997/ 1998) 'Che Guevara: The Legacy ofaRevolutionary Man', World Policy Journal, Winter 1997/ 1998
Mintzberg, H. (1993) Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall
Tilly, C. (1978) From Mobilization to Revolution, New York, McGraw Hill
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 7:09 PM , 1 comments
ဥသြဆွဲသံ မေလှမြိုင်လွမ်းချင်း တိတ်ဆိပ်ခြောက်ကပ်၊
အာဇာနည်ပုံရိပ်ပင် မမြင် ဦးညွှတ်ဂါရဝ မပြုရ၊
ခံစားမှုစာမျက်နှာ ပြန်ဖတ် ---
အတိတ်ဟာ စိတ်နာစရာ မကြေနပ်ချက် အပြည့်၊
ဒီအချိန် စစ်ကျွန်ဘဝ ရလိုသူများ -
သိက္ခာသုတ်သင်ပွဲ အိုးမဲအပြန်အလှန်လူး လုဝင်နေ၊
အနာဂတ်တွေ လှပဖို့ 
အာရုံဖြစ်သမျှ ဘယ်တော့မှ မမေ့ မပြေ ရင်ဆိုင် ပုန်ကန်မြဲဟေ့ ။ ။
ဝ၇ - ၁၆ - ၂ဝ၁ဝ
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 1:43 AM , 12 comments
ခွေးတိုးပေါက်၊ ငါးမျှားချိတ်နဲ့ ဖွတ်
ကျနော်ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်လေးတခုသတိရမိတယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စစ်တိုက်တန်း ကစားကြတာ ကစားရင်းနဲ့ ခြံစည်းရိုးတခုနားရောက်တော့ အောက်ခြေမှာ အပေါက်သေးသေး လေးတခုတွေ့တယ် ခွေးတိုးပေါက်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ ကစားရင်းနဲ့ အရှိန်လေးကလည်းရှိ တော့ ခလေးပဲဆိုတော့ တဖက်ရောက်ဘို့တိုးဝင်လိုက်တာ ကျောကုန်းမှာ ခြံစည်းရိုးနဲ့ငြိက ရော သွေးတွေထွက်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်းငိုတော့တာပေါ့ဗျာ ပြီးတော့ ကျနော့်ဘဘ ဆီကိုအော်ပြေးတော့တာပေါ့ ဘဘကမေးတယ် မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲတဲ့ ကျနော်ဟိုအ ပေါက်ကလေးကတိုးဝင်လိုက်တာ အခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ တယ် ဒီကောင်လေးနယ် အဲ့ဒါ ခွေးတိုးပေါက်လေးပဲကွ မင်းကလူလေခွေးမှမဟုတ်တာ ဖြစ်ပြီမလား လာခဲ့ဆိုပြီး အရက်ပြန် နဲ့သုတ်တော့ အော်ခဲ့ရတာလေးမှတ်မိနေသေးတယ်။ (စကားချပ်)
အခုလဲလေ နအဖစစ်အုပ်စုကလုပ်မဲ့ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ အပေါက်ကနေတိုးဝင် ကြဘို့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် ကျနော်စဉ်းစားမိနေတာကတော့ ကျနော်ငယ်ငယ်က ခွေးတိုးပေါက်ကတိုးဝင်သလိုဖြစ်နေမလားတွေးမိတာ။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီး တခုလုံးကလည်း ဘယ်လိုမှတရားမျှတမှုမရှိ (ဥပမာ။ ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလို့ရအောင် တောင်ဥပဒေထဲထည့်ရေးထားတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမှမရှိဘူး) ဒါကြီး အောက်မှာမှ ကော်မရှင်ဆိုတာလဲ စစ်အုပ်စုစိတ်ကြိုက်လူတွေနဲ့ ဥပဒေကလဲ မတရား ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကဘာဖြစ်လာမလဲ ရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးနော်။ ကြံဖွံအသင်းကနေ အခု ပါတီဖြစ် သွားပြီ။ ဒါကို ကြံဖွံအသင်းဆိုတာကြီးစစ်အုပ်စုလုပ်ကတည်းက ထောက်ပြခဲ့ကြတာပဲ တချိန် မှာ ဒီလိုလုပ်မှာပါဆိုတာလေ။ ဒါကိုပဲ တလော့လေးကကြားလိုက်ပါသေးတယ် ဒီအပေါက်က နေတဆင့်သွားသင့်တယ်လေးဘာလေး မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာပညာရှင်လေးတွေ စာတမ်းဖတ် တယ်ဆိုလားဘာလား။ အေးဟေ့ အားနာနာနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါခွေးတိုးပေါက်ဟေ့ ခွေးတိုးပေါက် ဟ စည်းကမ်းရှိသောဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကြီးကို စစ်အစိုးရက သွားပါ့မယ်ပြောပြောနေတာလေ ဒီလောက်မှဖွင့်မထားရင်ဘယ်ရမလဲ။ ဒါကိုအခွင့်အလမ်းးဆိုပြီးမှန်းနေကြတာ တော်တော်လေး ကိုခက်နေကြပါကလား။
အခုပဲကြည့်လေ ရွေးကောက်ပွဲဘယ်ရက်စမယ်မပြောသေးပေမဲ့ ကြံဖွံပါတီကြတော့ လုပ်စရာ ရှိတာတွေလုပ်နေကြတာ ဗိုလ်သိန်းစိန်တောင် ဦးသိန်းစိန်လုပ်ပြီးသွားပြီ ကျန်တဲ့ပါတီတွေ ကြတော့ ဘာမလုပ်နဲ့ ညာမလုပ်နဲ့ အိုဗျာ.. စုံနေတာပဲ ဒါလားဒီမိုကရေစီသွားခြင်တာ။ ဗမာစကားပုံတွေကစုံနေတော့ ထပ်ပြောခြင်သေးတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ စစ်အုပ်စု ကငါးစာချထားတာ ဟင်း…ပြေးဟတ်လိုက်လို့ကတော့ ငါးမျှားစာမိပြီသာမှတ်၊လွှတ်တော်ထဲ အတိုက်အခံတွေမရောက်နိုင်အောင်ဂွင်ဆင်ပြီးသားကြီးရှင်းနေတာပဲလေ။ တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ အခုထိတောင်မှတ်ပုံတင်လို့မရသေးဘူး စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ အကွက်စေ့အောင်သေသေချာချာလုပ်နေတာ ရှင်းနေတာပဲ အာဏာသူတို့လက်ထဲကနေလွတ် မသွားအောင်ပုံစံတမျိုးနဲ့ ဂွင်ဆင်ထားတာကြီး။
အခုတလောရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အဖွဲ့တွေပဲ မီဒီယာမှာ ငြီးသံလေးတွေစုံလို့ ကြားလာရတာ တချို့ကြတော့လဲ နီးစပ်ရာလေးတွေငြီးးပြသဗျ ဒီပုံဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ်သ လေးညာဖြစ်သလေး ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနီးလာလေ သူတို့လုပ်ရကိုင်ရတာ ကြပ်လာလေနဲ့ တူပါတယ်လေ။ အစကတည်းက ဒါကြီး(၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးက) လိမ်ဆင်ကြီးပါ ဆိုတော့ ဒီအပေါက်ကပဲတိုးဝင်ရမယ်ဆိသလိုလို အခုတော့ငြီးလာလိုက်ကြတာလေ။ ကျနော် တွေးမိတယ်လေ အော်... အိပ်များငိုက်လာလိုက်ကြသလားလို့။ ဟုတ်တယ်လေ ကြာလေ ဘီလူးရုပ်ကပိုပီပြင်လာလေဆိုတော့ ဖြစ်ကြမှာပေါ့လေ လူ့သဘာဝကိုး။
ဒီတော့ အကြံလေးဘာလေး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော့်ကြီး၊သေးများကို အကြံ ပေးခြင်သဗျာ။ အခုကတည်းက မတရားတာတွေကို စံနစ်တကျထောက်ပြကြပါ စုနိုင်သမျှ စုပြီးလုပ်ပေး၊ တောင်းဆိုပေး။လူထုကိုစည်းရုံးလို့ရသလောက်ဂွင်ကနေ ဒီဟာကတော့ မတရား တာ ၊ဒါကတော့ မဖြစ်သင့်တာဆိုတာကို တိုင်းပြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့် ပြောင်းလဲမှု ဆီသွားခြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေက လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့အလုပ်လို့ထင်တာပဲ။ ဒါလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ် လေးတွေကို တရားသဖြင့်လုပ်တာလို့ ကျုပ်ကတော့ထင်တာပဲ၊ ကျုပ်တို့ကတော့ (၂၀၁၀) အစကတည်းက လက်မခံဘူး ဒီတော့ ကျုပ်တို့အလုပ်ဆက်လုပ်သွားကြမှာပါ စိတ်ချပါ။ ဒီလိုမဟုတ်လို့ကတော့ နောက်ထပ်စကားပုံလေးတခုပြောရအုံးမယ်ဗျာ မွဲခြင်တဲ့ခွေးပြာပုံတိုး တဲ့ လိုအပ်သလိုသာတွေးကြပေတော့ဗျို့။ ခင်းဗျားတို့နဲ့(ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်တဲ့သူတွေ) နဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲခြင်တာတော့ တူလောက်တယ်ထင်တာပဲ။ မတူတာက စဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ကိုင်ပုံပဲ။ ထားလိုက်ပါတော့လေ ဗန်းမော်ဆရာတော် စကားနဲ့ပြောရ ရင်တော့ ဖွတ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းဖွတ်၊ မိန်းမကြိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းမိန်းမလို့ ပြော သွားတာတော့ ကြားဘူး၊ဖတ်ဘူးပါတယ်။
အော် ကျန်သွားလို့ထပ်ပြောပါရစေဗျာ ဘာတဲ့.. အော် ဘုရားမှတ်လို့ကိုးကွယ်တာ ဖွတ်ထွက် လာမှ တောင်ပို့မှန်းသိတော့တယ်ဆိုသလိုဆိုရင်တော့ ကျိန်းသေတယ်ဗျို့ ထွက်လာမဲ့ဖွတ်က ကြံ့ဖွတ် ဆိုတာတော့ ကျိန်းသေတယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 6:34 AM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 3:33 AM ,6comments
ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆိုတဲ့အပြောကို (နအဖ) စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ တွင်တွင် ကြီးပြောတတ်ကြပါတယ်။ စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းထားတဲ့တောက်လျှောက် ဥပဒေတွေ၊အမိန့် တွေ တသီကြီးထုတ် ပြီးတော့ သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေကိုပဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်မလေးစား၊မ လိုက်နာ လူထုကိုကြတော့ ဥပဒေဖောက်ဖျက်ရင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လေးဘာလေးနဲ့ ပြောနေလိုက်တာ တော်တော်နားကြားရခက်နေတော့တာပါပဲ။ မနေ့ကပဲ ဗိုလ်သိန်းစိန်ကနေ ဦးသိန်းစိန်ပြောင်းပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင်လိုက်ပြန်ပကော နအဖကထုတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေဆိုတာ ဘယ်လိုမှတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါးမြန်မာပြည်မှာ သဘောပေါက်နေတဲ့ကိစ္စ ဟောအခု အာဏာရမ္မကလောဘဘယ်လောက်ကြီးနေသလဲဆိုရင် ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ ပါတီမတ်ပုံတင်လာပြီကောလေ သိန်းစိန်နဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင် စာရင်းမှာပါလာတဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေဆိုတဲ့သူတွေအားလုံး နအဖ စစ်အုပ်စုက သူတို့ကို သူတို့ နိုင်ငံဝန်းထမ်းပါလို့ပြေနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကအများစု ဒီတော့ ဥပဒေဆိုတာကို လိုအပ် ရင်စိတ်ကြိုက်ထုတ်မယ် တရားတာ မတရားတာငါတို့မသိဘူး လိုအပ်ရင်ဗြောင်လည်းလုပ် တယ်ကွာ ဘာတတ်နိုင်တုန်းဆိုတဲ့သဘော လူမိုက်လုပ်တယ်ပြောပါတော့။
တိုင်ပြည်မှာဗြောင်လိမ်ပြောင်စားဘယ်သူတွေလုပ်ပြီး အာဏာကိုဘယ်သူတွေက အငန်းမရ ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ရွေးကောက် ပွဲဥပဒေဆိုတာတွေကို အဲ့ဒီအချိန်က (နဝတ) စစ်အုပ်စုကပဲ ပြဌာန်းပေးခဲ့တာပဲ တပြည်လုံးက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပဲ အဲ့ဒီအချိန်က ၈၈၈၈ လေးလုံးလူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်က တော်တော်လေးကျန်နေသေးတော့ မဲပေးတာဟာ မနက်အစောကြီးကစတယ် ညနေ မဲရုံပိတ်တော့ မဲရေ(ရည်)ရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကကော်မရှင်ဆိုတာဟာ တစုံတရာ လူသိသူသိ ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ပါသေးတယ်။ သမာသမတ်တော့ရှိလှတယ်မဟုတ်ဘူး ထားပါတော့ ဒါပေမဲ့ အောက်ခြေ မြို့နယ် ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်အဆင့်မှာကြတော့ အမှန်အတိုင်းမဲရေ(ရည်)ပေးမဲ့ သူတွေက မဲရုံအများစု ဒီတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း NLD ကမဲပြတ်နိုင်ရော စစ်အုပ်စု မျက်ဖြူဆိုက်တော့တာပဲလေ ဒီမှတင် ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား အာဏာအငန်းမရဖြစ်မှုက အရပ် စကားနဲ့ပြောရရင်ပေါ်တင်ကြီးလုပ်တော့တာပဲ အာဏာမအပ်ဘူး လွတ်တော်ခေါ်ဘို့ ဝေလာ ဝေး တောက်လျှောက်ညစ်ပတ်တော့တာပဲ အားလုံးသိပြီးသားအမိန်တွေတသီကြီးထုတ် လွှတ် တော်အမတ်တွေဖမ်း ပါတီတွေမတရားအသင်းကြေငြာ တောက်လျှောက်ပြောင်မတရားလုပ် ခဲ့တာပဲ ရှင်းနေတာပါ။
နောက်အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာကို နှစ်ရှည်လများ စိတ်ကြိုက်လုပ် ဥပဒေကို စိတ်ကြိုက်ရေး ရတဲ့နည်းနဲ့ လိမ်ကောက်၊အကြပ်ကိုင်၊ခြိမ်းခြောက် နည်းပေါင်းစုံနဲ့အတည်ပြု လုပ်ခြင်တိုင်း လုပ်ပြီးအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးပွဲထုတ်လာတာ ကလား ဒီလိုကလိန်ကျိငြမ်းဆင်လာတာတောင် အားမရဘူး အဲ့ဒီဥပဒေအရ လွတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဗိုလ် ၂၅ နှုန်း က ရွေးကောက်ခံစရာမလို အော်တော်မစ်တစ်အနေအထား လွတ်တော်ထဲ မှာ မဲခွဲရင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်မှ အဲ့ဒီဥပဒေပြင်လို့ရမှာ ဒါတောင်အားမရဘူး အခု ကြံဖွံ ပါတီထောင်ပါပြီပေါ့ဗျာ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတာ နိုင်ငံတော်လစာစားရင်ဘယ်သူမဆိုဝန်ထမ်းပဲ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ နိုင်ငံရေးပါတီမှာဝင်ရင် ဝန်းထမ်းအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ရမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် အဲ့ဒီပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရပဲဖျက်သိမ်းပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေဘယ်ရောက်သွားလဲ ရှင်းနေ တာပဲ စစ်တပ်ကထွက်တယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဆက်လုပ်တယ် ဗိုလ်ကိုဦးပြောင်းတာကလွဲလို့ ဘာမှ မထူး။ ဒီတော့…စစ်အုပ်စုက ဥပဒေအပေါ်မှာရှိနေပြီး ကျန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေသွားပါ့မယ် ဆိုတဲ့ပါတီတွေကသာ ဥပဒေအောက်မှာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ ဒီနေရာမှာ မပြောခြင်ပေမဲ့ ပြောရ ပါတော့မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲသည်သာ တခုတည်းသောထွက်ပေါက်၊ရွေးကောက်ပွဲကနေ လွတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ယူမယ်၊ ဥပဒေတွေကိုမကြိုက်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သာအဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့ သူ တွေကိုတောင် ဗြောင်စော်ကားလိုက်တာပါပဲ။ မလုပ်ရသေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာ တောင် စစ်အုပ်စုက ဗြောင်စဖောက်နေပြီကွယ်ရို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ခင်ဗျားတို့နိုင်မယ်ဆိုရင် တောင်အနည်းစုလေး ဘာမှာကိုလုပ်လို့မရအောင်ကို စစ်အုပ်စုကလုပ်မှာပါ။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားတဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရုတ်ကလေးတချို့လောက်တော့ ဖြစ်မှာပေါ့နော် (စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ သမိုင်းမှာတော့ မှတ်တိုင်ဖြစ်သွားကြမှာ စိတ်ချ) ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်လက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့ လက်မခံတဲ့သူတွေကြားမှာ ကွာတာက ၂၀၀၈ ဥပဒေကိုလက်မခံတဲ့ သူတွေက ရွေးကောက်ပွဲကိုမဝင်ဘူး လက်ခံတဲ့သူတွေက ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောက ရှင်းနေတော့တာပဲ။
ဒီတော့ ရွေးးကောက်ပွဲကိုအဖက်ဖက်မှ စိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့ စစ်အုပ်စုက ဥပဒေကို ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားလုပ်လာတာဟာ တနည်းအားဖြင့် ဗြောင်ချိုးဖောက်လာတာဟာ ရွေး ကောက်ပွဲကိုလက်ခံတဲ့ ဥပဒေအရဝင်ပြိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာ တာဝန်လုံးလုံးရှိလာပြီဖြစ် တယ်။ဒီလိုမတရားတာကို မတရားဘူးလို့ပြောရဲရမဲ့အချိန်ပဲ။ လက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေက တောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်နေတော့ သူတို့အလုပ်သူတို့ဆက်လုပ်သွားမှာပဲ ဒါကရှင်းပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီဥပဒေကိုလက်ခံတဲ့သူတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမဲ့ပါတီတွေကို နအဖစစ်အုပ်စုက ဗြောင်လုပ်ပြနေပြီ ခင်ဗျားတို့ကို လွတ်တော်ထဲမရောက်ခင်ကို သွေးတိုးစမ်းနေပြီဆိုတာပါပဲ။
စစ်အုပ်စု စစ်အာဏာရှင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသာမြင်တဲ့သူတွေကတော့ ၁၉၆၂ ကလည်းပြောခဲ့ တယ် စစ်အုပ်စု စစ်အာဏာရှင်စနစ်ထူထောင်တာလို့ ၁၉၈၈ ကလည်းပြောခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ ကလည်းသက်သေထူပြီးပြီး။ ၂၀၀၇ ကလည်းမှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ၂၀၁၀ ကတော့ အဆုံး သပ်တိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ စစ်အုပ်စုကို သမိုင်းမှာဘယ်သူတွေကပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေကသပ်မှတ်ကြမှာပါပဲ။ ခေတ်သမိုင်း တိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြရတယ်မလား။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 5:37 AM ,9comments
ဂီတမှာ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုက သိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်လောက်ကလို့ထင်တာပါပဲ ဂျပန်မှာလုပ်တဲ့ Asian Music Festival မှာ ပြန်မာပြည်က လေးဖြူနဲ့ Iron Cross သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ ဂီတပညာရှင် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ဧရာဝတီ ကိုဆိုခဲ့ရပါတယ်။ အင်မတန်လေးနက်တဲ့စာသားတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတာပါ မြန်မာတွေဟာတကယ်ဖန်တီးရင် ကမ္ဘာ့အဆင်မှီအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ရုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းချို့တဲ့လို့သာပါ။ ညံဖြင်းတဲ့အုပ်စိုးသူတွေကြောင့်လဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တနေ့မှာဧရာဝတီဟာရှင်သန်နိုးထလာပြီး ရာဇဝင်သစ်တွေကို ရေးဖွဲ့ပါလိမ့်အုံးမယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 2:56 AM , 10 comments
အောင်ဆန်းဦးကို ကံဆောင်လိုက်ပြီ ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးမှ အောင်ဆန်းဦးကို ကံဆောင်လိုက်ပြီ ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီးပုံကြီးချဲ့ဖတ်ပါ။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 9:31 PM ,0comments
တောင်ပေါ်ဒေသရဲ့ ဆောင်းတွင်း အအေးဒဏ်ကြောင့် သူမ လက်ဖျားကလေးများ ထုံနေ သလိုခံစားနေရသည်။ သို့ပေမယ့် ချစ်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ ရှားရှားပါးပါးအချိန်လေးကို အအေး ဒဏ်ကြောင့် မကုန်ဆုံးစေချင်ပါ။ တွေ့နေကျ ဒီတောင်ပေါ်ဘုရားလေးပေါ်မှာ ချစ်သူမျက် နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း၊ သူပြောသော စကားလေးတွေကို နားထောင်ရတဲ့ အရသာကို သူမဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါ။ ချစ်သူပြောသော စကားလေးများက စုံလင်လှသည်။ နိုင်ငံရေး၊ တိုင်း ရင်းသားအရေး၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူတန်းစားအရေး။ သူမနားလည် သည်များလဲရှိ၊ နားမလည်သည်များလဲရှိ။ သို့ပေမယ့် ချစ်သူပြောသော စကားလုံးလေးတွေမို့ သူမအတွေးထဲမှာအမြတ်တနိုးသိမ်းရင်းနားထောင်ဖြစ်သည်။
မိသားစု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း။အရာရာကို ဆန့်ကျင်ပြီး လျှောက်ဖို့ ကြိုးစား နေရတဲ့ ဒီလမ်းပေါ်မှာ ချစ်သူသည်သာ လမ်းပြကြယ်စင်။ ချစ်သူသည်သာ သူမရဲ့ဘ၀ဖော်။ အချစ်ကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော လမ်းမဟုတ်ပေမယ့် သူမရွေးချယ်ခဲ့သော လမ်းပေါ်မှာ ဆရာ ဆိုလဲဟုတ်၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုလဲဟုတ်၊ ချစ်သူဆိုလဲဟုတ်၊ ဘ၀လက်တွဲဖော်လို့ ရည်မှန်းထား သူ ဆိုလဲဟုတ်တဲ့ ဒီလိုလူတယောက်က အဆင်သင့် ပေါ်လာခဲ့တာ သူမရဲ့ ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်ပဲထင်ပါရဲ့။
“ညီမလေး အရမ်းချမ်းနေပြီလား။ အနွေးထည်က ပါးပါးလေးဝတ်လာတာကိုး။ အစ်ကို့ဂျာကင် ၀တ်ထားလိုက်နော်”
“မလုပ်ပါနဲ့အစ်ကိုရဲ့။ အစ်ကို့က ဂျာကင်ချွတ်လိုက်ရင် ရှပ်အကျီင်္လေးနဲ့ရယ်။ ပိုချမ်းမှာပေါ့”
“ရပါတယ်ညီမလေးရဲ့။ အစ်ကိုက တောင်ပေါ်မှာပဲမွေး၊ တောင်ပေါ်မှာပဲ နေလာတဲ့သူ”
“အောင်မာ။ ညီမလေးလဲ တောင်ပေါ်သူပါပဲနော်” “ခုတော့ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ မြေပြန့်မှာ ကျောင်းသွားတက်နေတာကိုး။ခုပဲကြည့်။အနွေးထည်ထူထူဝတ်မလာဘူး”
အစ်ကိုက ဆူသလိုလေး ပြောရင်း ဂျာကင်အကျီင်္လေးကို ၀တ်ပေးသည်။ အသက်ချင်းကလဲ ဆယ်နှစ်ကျော်ကွာတာမို့ ချစ်သူတပိုင်း၊ မောင်နှမ တပိုင်းလို ဖြစ်နေကြသည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစ်ကို ဂရုဏာဒေါသော အပြောလေးတွေထဲက စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေကို သူမသဘော တကျနဲ့ကြည်နူးနေတတ်ခဲ့ပြီ။
“မှန်းစမ်း။ လက်တွေက အေးနေတာပဲ။ သွေးပူသွားအောင် လမ်းထလျှောက်ကြရအောင်။ လမ်းသွားရင်းစကားပြောကြတာပေါ့”
အနီးက တောတန်းလေးဘက်သို့ သူမတို့ ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြသည်။ အစ်ကိုဆုပ်ကိုင် ထားသော သူမလက်ကလေးက တစတစ ပြန်နွေးလာသလို ပြောနေကြသော စကားလေး တွေကလဲ အရှိန်ရလာသည်။ ဒီရိုးမတောင်တန်းကြီးပေါ်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေ အကြောင်း ကြားရတိုင်း သူမသွေးတွေ ဆူပွက်နေကြ။ ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေမှာ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျမပါဖြစ်ခဲ့ရတာအတွက်လူဖြစ်နောက်ကျသလိုခံစားရတတ်စမြဲ။
“ညီမလေး တောခို ချင်တယ်အစ်ကို။ ဒီစကားကို ပြောနေတာလဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မက တော့ဘူး။ဆက်သွယ်ပေးဖို့အစ်ကို့ကိုပြောတိုင်းလဲတားနေတာပဲ”
အကြိမ်များစွာ ဖွင့်ခဲ့ဖူးသော ဓာတ်ပြားဟောင်းကိုပဲ သူမပြန်ဖွင့်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ကာလအချိန်၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေအရ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ရေချိန်ကျလာတာတွေကို သူမ မသိလို့တော့ မဟုတ်။ သို့ပေမယ့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ခေတ် လုံးဝ ကုန်သွားပြီလို့ တော့ သူမ မယူဆမိ။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တရပ်လို့ သူမစိတ်ထဲ ယုံကြည်ထားမိသည်။
“မြို့ပေါ်မှာ နေလို့ ရသေးသရွေ့တော့ တောခိုတာကို အစ်ကိုက အားမပေးချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ညီမလေးကို မြို့ပေါ်မှာပဲ နေခိုင်းတာပါ။ ပညာဆက်သင်။ လူတွေကို စည်းရုံး၊ စာတွေဖတ်၊ ပြင်ဆင်၊ တည်ဆောက်။ အချိန်အခါစောင့်။ အစ်ကိုက ဒီတာဝန်တွေပဲ ညီမလေးကို ဆက်ယူ စေချင်တယ်”
“ညီမလေးကလေ အဲဒီလေ့လာရေးတွေလုပ်၊ ပြင်ဆင်၊ တည်ဆောက်တာတွေကို စိတ်မရှည် တော့သလိုဖြစ်နေတယ်။တခါတည်းသေနတ်ဆွဲပြီးရင်ဆိုင်ပစ်ချင်တယ်”
“ကိုယ့်ထက် အဆမတန် အင်အား ကြီးမားတဲ့ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်လို့ မရတာတွေ အများကြီးပဲ ညီမလေး။ အားကြီးသူကို အားနည်းသူက ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရင် အားကြီးသူက နိုင်မှာပဲ။ ဒီတော့ သွယ်ဝိုက်ပြီး ရင်ဆိုင်ရတယ်။ ဒီလိုရင်ဆိုင် တဲ့အခါမှာ ဥာဏ်ကို လွှာပြီး အသုံးချနိုင်ဖို့ လိုမယ်။ စစ်သုံးစကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ရန်သူက Conventional attack နဲ့ ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က Conventional Defense နဲ့ ပြန်ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုသလို ရန်သူရဲ့ Barbarism ကို ကိုယ့်ဘက်က Guerrilla Warfare Strategy သုံးပြီးအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားရမယ်”
“ဒါကြောင့် အစ်ကို့ကို ညီမလေး ပြောတာလေ။ တောခိုပါမယ်ဆို။ Guerrilla လုပ်ချင်တာ။ သူပုန်လုပ်ချင်တာ”
“ညီမလေးက သူပုန်ဖြစ်နေပြီပဲဥစ္စာ”“အစ်ကိုကလဲ လုပ်ပြန်ပြီ။ ညီမလေးက ဘယ်မှာ သူပုန်ဖြစ်သေးလို့လဲ။ ဘာလက်နက်မှလဲ ညီမလေးလက်ထဲမှာ မရှိသေးဘူး။ ဘာတိုက်ပွဲမှလဲ မတိုက်ရသေးဘူး။ တိုက်ဖို့နေနေသာသာ တောခိုပါမယ်ဆိုတာလဲ အစ်ကိုက ခွင့်မပြုဘူး”
သူမစကားအဆုံးမှ အစ်ကိုက တဟားဟား ထရီတာကြောင့် သူမ စိတ်တိုသွားရသည်။
“အစ်ကိုနော်။ လူကို မရီနဲ့။ ဘာလဲ။ ညီမလေးက သေနတ်မကိုင်ရဲဘူး ထင်လို့လား”
“မထင်ပါဘူးဗျာ။ ညီမလေး လုပ်ချင်ရင် မလုပ်ရဲတာ ဘာမှ မရှိဘူးဆိုတာ အစ်ကို ယုံပြီးသား။ ညီမလေးပြောပုံကို သဘောကျလို့ ရီမိတာပါ။ အင်း- တကယ်တော့ အစ်ကို လိုသွားတာ။ သူပုန်ဆိုတာမှာ တောခိုပြီး အခိုင်အမာစခန်းတည်ဆောက်၊ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်တဲ့ သူပုန်ရှိသလို မြို့ပြသူပုန်လဲရှိတယ်ဆိုတာညီမလေးကိုအစ်ကိုမပြောပြခဲ့မိဘူး”
“မြို့ပြသူပုန် (urban guerrilla) ဆိုတာကလဲ တောထဲတောင်ထဲမှာ အခြေစိုက် တော်လှန်နေကြသူတွေလိုပဲ ဖိနှိပ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေကို တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်နေသူတွေပဲ ညီမလေး။ တခုပဲ ကွာတာက operation area ဖြစ်တဲ့ လှုပ်ရှားနယ်မြေပဲ။ မြို့ပြသူပုန်ရဲ့ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားနယ်မြေကမြို့ကြီးတွေပဲ”
အစ်ကို ရှင်းပြနေသည်များကို သူမစိတ်ဝင်တစားနှင့် နားထောင်နေမိသည်။ မြို့ပြ သူပုန်ဆိုသော စကားလုံးလေးကို ကြားလိုက်ရကတည်းက သူမရင်ထဲက ရင်ခုန်သံတွေ ကျယ်လောင်လာခဲ့ဖူးသည်။ ဒီစကားလုံးလေးက သူပုန်လုပ်ပြီး မတရားမှုကို ပုန်ကန်လိုသော သူမရဲ့ သွေးတွေကို ပွက်ပွက်ဆူနေစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လဲ အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ အစ်ကို့ကို သူမပြောရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလမှာ အစ်ကိုလဲ အားနေသလို သူမလဲ အားနေသည်။ သူငယ်ချင်း အိမ်တွေသွားမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကကားမောင်းသမားကို သူငယ်ချင်း တွေအိမ်မှာ ချခိုင်း၊ ရောက်ရာနေရာမှာ ငါးမိနစ်လောက်နေပြီးမှ တက္ကစီနဲ့ တခါပြန်ထွက်၊ လာကြိုမယ့်အချိန်မရောက်ခင် ကြိုပြန်လာရတာမှ လွဲ၍ သူမ ဆီမှာ အခက်အခဲက သိပ်မရှိလှ။ သူမသိချင်၊ လုပ်ချင်ပြီဆိုလျှင် ဒိထက်ခက်တဲ့ အခက်အခဲ ဘယ်လောက်ပဲ ကြုံကြုံ၊ မရရ အောင်ကြိုးစားလုပ်ဖို့ဇွဲခတ်တတ်တာကလဲသူမရဲ့ဗီဇစိတ်။
“တောမှာ သူပုန်ထရင် သူပုန်နဲ့ ဓားပြတွေ၊ မှောင်ခိုတွေကို ရောထွေးပြီး အထင်လွဲအောင် အာဏာရှင်တွေက လုပ်တတ်တယ်။ ဒီလိုပဲ မြို့မှာ သူပုန်ထရင်လဲ သူပုန်တွေနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု လုပ်နေသူတွေကို ရောထွေးပြီး အထင်လွဲအောင် လုပ်ခံရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူပုန်ဆိုတာမှာက ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ၀ိသေသ တွေရှိတယ်။ သူပုန်တွေဆိုတာက လူထုကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်က ဖိနှိပ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ အာဏာရှင် ယန္တရားတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ သူပုန်တွေမှာ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူပုန်တွေ ဆိုတာက ဖိနှိပ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေကို အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုဘက်က ရပ်တည်တော်လှန် ပေးသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ပြသူပုန်တယောက်ဟာ လိုအပ်လို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရတဲ့အခါမှာ ရန်သူစစ်အာဏာရှင် စနစ်ကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားရမယ်။ မြို့ပြသူပုန်တယောက် ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်တာဝန်ကတော့ ရန်သူစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဒေါက် တိုင်တွေကို စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖရိုဖရဲဖြစ်စေမှု၊ အက်ကြောင်း ထစေမှု၊ လူထုနဲ့ တော်လှန်ရေး ပေါင်းစပ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှုတွေနဲ့ အာဏာရှင်ယန္တရားကိုဖြိုလဲ ပစ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်”
“အဲလိုတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲအစ်ကို။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ”စိတ်အားထက် သန်စွာဖြင့်သူမ၀င်မေးမိသည်။
“အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အရည်အချင်းပဲ ညီမလေး။ သူပုန်လုပ်မယ့်လူ တယောက်ဟာ သတ္တိရှိရမယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်၊ နယ်မြေကျွမ်းအောင် လေ့လာထားရမယ်။ ကိုယ်လှုပ်ရှားရမယ့် နယ်မြေက ကိုယ့်နယ် မဟုတ်တဲ့အခါ အစစအရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ ဒီနယ်ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ၊ လုပ်ရိုးလုပ် စဉ်တွေ၊ နယ်မြေခံလူထု အခြေအနေတွေ၊ နယ်မြေထဲက ရန်သူ့လူအ၀င်အထွက် အနေ အထားတွေ၊ ရန်သူ့သတင်းပေးတွေကိုပါ တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာ ထားရမယ်။ ဆရာဝန်၊ ကျူရှင်ဆရာ၊ စာရေးဆရာစတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တခုခု ပြထားနိုင်ရင် လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးဝင်တယ်။ မဟုတ်ရင်လဲ နယ်မြေခံလူထုနဲ့ ရင်းနှီးအောင် ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်တာမျိုး၊ စာအုပ်အငှားဆိုင်ဖွင့်တာမျိုး စတာလေးတွေပေါ့။ မြို့ပြသူပုန် တယောက်မှာ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ လက်နက်ပစ္စည်းစတွေက အားနည်းတယ်။ အလွယ် တကူ သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းလို့လဲ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အ၀င်လမ်း၊ အထွက်လမ်းတွေကို သေချာ ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ရမယ်။ ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးတဲ့ နေရာမျိုး၊ ရန်သူုကို ကိုယ့်ဘက်က ကြိုပြီး လက်ဦးမှု ယူနိုင်မယ့် နေရာမျိုးကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ နောက်တချက်က လက်နက်ပစ္စည်း။ တကယ်သာ အသုံးပြုတတ်ရင် မီးဖိုချောင်က ဓားတချောင်းကလဲ သေနတ်တလက်လို အသုံးဝင်ပါတယ်”
အစ်ကို့စကားကြောင့် သူမ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။“အစ်ကိုပြောသလိုဆို ဓားပေါက်၊ ဓားထိုး နည်းတောင် သင်ထားရမလိုပဲ” “လိုအပ်ရင် ပြောတာပါ။ ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ထားရင်တော့ မမှားဘူးပေါ့။ မြို့ပြသူပုန်တယောက်ဟာ အရေးကြုံချိန်မှာ အထက်က ညွန်ကြားချက်ကို စောင့်လို့ မရဘူး။ ကိုယ်ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာ အခက်အခဲတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန် လှုပ်ရှားနိုင်မှုက အရေကြီးတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမှာကို မကြောက်ရဘူး။ ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်ဆုံမိတဲ့အခါ မတွေဝေရဘူး။ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး သူပစ်ကိုယ်ပစ်၊ သူသတ်ကိုယ်သတ် လုပ်ရတာလဲ ရှိချင်ရှိမှာပဲ။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ သွေးအေးဖို့ လိုတယ်။ သူပုန်တယောက်ဟာ အအိပ်အစား ကိစ္စတွေမှာ ဂျီးမများရဘူး။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေနိုင်ရမယ်။ ရန်သူက မရိပ်မိခင်မှာ တခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ ရှေ့ကပြပြီး နပြတတ်ဖို့ လိုအပ်သလို ရန်သူက ရိပ်မိသွားချိန်တွေမှာ ပုန်းအောင်းနေထိုင်နည်းတွေလဲ သိရမယ်။ ပင်ပန်းတာ၊ ဆာ လောင်မွတ်သိပ်တာ၊ ရာသီဥတုဒဏ်၊ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ ဒဏ်တွေမှာလဲ စိတ်ဓာတ်ကို အကျမခံပဲ ကျားကန်နိုင်ရမယ်။ သူပုန်တယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံးက စိတ်ဓာတ်ခိုင် မာမှုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ရန်သူက ကိုယ့်ထက် အင်အားကြီးတဲ့ ရန်သူ ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအင်အားကြီးတာကို ဘာမှတွေးပြီး စိုးရိမ်စရာ တော့ မလိုဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ရန်သူအာဏာရှင်တွေ ဆိုတာက လူထုကို ဖိနှိပ်နေတဲ့ လူထုရဲ့ ချဉ်ဖတ်တွေ။ သူပုန်တွေဆိုတာကကျတော့ လူထုရှေ့က ရပ်တည်ပေးနေတဲ့၊ အမှန် တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်လိုပဲ။ တချိန်ကျရင် တရားသောစစ်ကပဲ အနိုင် ရပါတယ် ညီမလေး။ တကမ္ဘာလုံးက စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေ အားလုံး တစတစ ပြိုလဲ ကျနေပြီပဲ”
“အဲဒါကတော့ ယုံတယ်အစ်ကို။ ညီမလေးဆီမှာ ရန်သူက အင်အားကြီးလို့ အနိုင်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ အားငယ်စိတ်တွေ တခါမှ မ၀င်ဖူးဘူး။ အားကြီးတဲ့လူက အားနည်းသူကို အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ တိရစ္ဆာန်လောကမှာပဲ ရှိပါတယ်အစ်ကို။ လူ့လော ကမှာတော့ ဘယ်လောက် အားကြီးတဲ့ အာဏာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တရားမျှတတဲ့ ပုန်ကန်မှု တွေကို မနှိမ်နင်းနိုင်ပါဘူး။ တော်လှန်ရေး သမားတွေဆိုတာက ဘိုးဘိုးအောင် ၀လုံးလေး တွေလိုပဲ လို့ ညီမလေးတော့ ယုံတယ်။ တယောက်ကို သတ်ရင် နောက်နှစ်ယောက် ထွက်လာမှာပဲ။ ဆယ်ယောက်ကို ထောင်ချရင် အယောက်တရာ ထပ်ထွက်လာဦးမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေ ဆိုတာက ဖိနှိပ်သမျှ လည်စင်းခံပေးနေမယ့် တိရစ္ဆာန်တွေ မဟုတ်လို့ပဲ။ လူတွေ ဖြစ်နေကြလို့ပဲ။ အားမတန်လို့သာ ခဏမာန် လျှော့ချ င်လျှော့ထားကြမယ်။ ရင်ထဲက ပုန်ကန်လိုစိတ်တွေကတော့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး”
“အစ်ကိုလဲ ဒါကို ယုံတယ် ညီမလေး။ အစ်ကိုတို့ ပြည်သူတွေဟာ တခါတရံမှာ ခေါင်းငုံ့ချင် ငုံ့နေကြမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အာဏာရှင်တွေကို ကြောက်ရွံ့ပြီး လုပ်သမျှ လည်စင်းခံပေးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းငုံ့ရင်း ဓားသွေးနေကြတာပါ။ ဓားတွေ ထက်လာတဲ့ တနေ့မှာ အာဏာရှင် ယန္တရားတွေကို တစစီ ဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ်ခြေမွကြလိမ့်မယ်။ ဒီလို မခြေမွနိုင်သေးချိန် မှာတော့ အစစအရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ တိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ကြံ့ကြံ့ ခိုင်ထားကြရမယ်။ အာဏာရှင်ဘက်တော်သားတွေဟာ ကိုယ့်ထက်သာလွန်တဲ့ လက်နက် တွေကို ကိုင်ထားနိုင်မှာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်လက်နက်မှာတော့ အစ်ကိုတို့ သူပုန်တွေကို မမှီဘူး။ သူပုန်တယောက်ရဲ့ အရာရာကို စွန့်ထားရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ အာဏာ ရှင်ဘက်တော်သားတွေရဲ့ ကြေးစားစိတ်တွေထက် အဆမတန် ပိုမြင့်မြတ်တယ်။ ပိုထက်မြက် တယ်။ အစ်ကိုကတော့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား။ အစ်ကို့ဘ၀တ သက်တာမှာ လူ့အသက်နဲ့ ယုံကြည်ချက်စိတ်ဓာတ် အထဲက တခုကိုပဲ ရွေးရတော့မယ်ဆိုရင် အသက်ကိုပဲ အသေခံမယ်။ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အသေမခံဘူး။ ကိုယ့်ဝိညာဉ်က အသက်မရှိတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကို ပြန်ပြီး အလေးပြုနိုင်စေရမယ်။ ယုံကြည်ချက်သေပြီး အသက်ရှင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကိုယ် မလိုချင်ဘူး။ရွံရှာစက်ဆုပ်မိလိမ့်မယ်”
“ညီမလေးလဲ အဲလိုပါပဲ။ ညီမလေးရဲ့ ဘ၀မှာ အသက်စွန့်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ နောက်တွန့်တွေဝေမယ့် သွေးတွေ ညီမလေး သွေးကြောထဲမှာ ရှိမနေစေရဘူး။ တကယ်လို့များ ညီမလေးရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတထောင့် တနေရာမှာများ ဒီသွေး တွေရှိနေခဲ့ရင်ညီမလေးကိုယ်တိုင်ဖောက်ထုတ်ပစ်မယ်”
စကားများ အဆုံးမှာ သူမတို့ နှစ်ယောက် အကြည့်ချင်း ဆုံမိကြသည်။ တူညီသော စိတ်များအတွက် တယောက်ကိုတယောက် လေးစားတန်ဖိုးထားမိကြသည်။ ဆုပ်ကိုင်မိကြ သော လက်ဖ၀ါးနှစ်ခုမှသည် တော်လှန်ရေးသစ္စာတရားတို့ အပြန်အလှန် စီးဆင်းသွားခဲ့သည် ဆိုတာကတော့အသေအချာပင်။
“အစ်ကို ညီမလေးကို ဟိုကိစ္စ သင်ပေးမယ်ဆို”သူမက အားတက်သရော်ပြောတော့ အစ်ကိုက ပြုံးသည်။ မနေ့က နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့် အချက်များကို အစ်ကိုက ပြောပြလေသည်။ ရေကူးခြင်း၊ တောလမ်းခရီးသွားခြင်း၊ ကားမောင်းခြင်း၊ ကားစက်ပြင်ခြင်း၊ ရေဒီယိုအသုံးပြုခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းသုံးခြင်း၊ မြေပုံဖတ်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒနှင့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ အခြေခံများ၊ စာကူးနည်း၊ စာရိုက်နည်းများ၊ တံဆိပ်တုံး လုပ်နည်းများ၊ ရှေးဦးသူနာပြု၊ ဆေးဝါးအခြေခံစသည်များကို တတ်ကျွမ်းထားသင့်ကြောင်း အစ်ကိုက ပြောရင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သည့် ကိစ္စတခုကိုလဲ အခြေခံ သင်ပေးမည်ဟု ဆိုလေသည်။
“ပြောသာပြောရတယ်။ ညီမလေးကလေ မီးမလာရင်တောင် ဖယောင်းတိုင်ပဲ ထွန်းတယ်။ မှန်အိမ်မှာ မီးစာကို မီးညှိတာတောင် လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး”သူမက ဆက်ပြောတော့ အစ်ကိုက မပြုံးပဲဝါးလုံးကွဲရယ်လေသည်။“ဒါပေမယ့်လဲ မတူဘူးလေနော်။ လိုအပ်မှာတွေအားလုံးကို အစ်ကိုသင်ပေးထားသမျှ ညီမလေး ကြိုးစားသင်ထားမှာပါ။ တချိန်မှာ မလိုလာဘူးလို့ မှ ပြောလို့ မရတာပဲနော်”သူမတို့ ဆရာ၊ တပည့်နှစ်ယောက်က အဲလိုပဲ အတိုင်အဖောက်ညီ ကြပါသည်။မြို့ပြ တိုက်ပွဲ ပုံဖော်ခြင်း နည်းဗျူဟာများကိုလဲ အစ်ကိုက အသေးစိတ်ရှင်းပြ ပါသည်။ လူထုတိုက်ပွဲနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ရေး၊ စည်းရုံးရေး၊ သတင်းထောက်လှမ်းရေးများ မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုလဲဆက်ပြောပြသည်။
“အရေးကြီးဆုံးကတော့ လက်ဦးမှု ယူနိုင်ဖို့ပဲ ညီမလေး။ အခြေအနေက ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိနေရမယ်။ ရန်သူ့လက်ထဲ မရှိရဘူး။ ရန်သူ့အင်အားကို ကိုယ်သိရမယ်၊ ရန်သူ့နေရာကို ကိုယ်သိရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို ရန်သူမသိအောင် တတ်နိုင်သမျှ ဖုန်းကွယ်နေရမယ်။ ကိုယ့်နေရာကို ရန်သူမသိစေရဘူး။ ကိုယ့်အင်အားကို ရန်သူ မသိစေရဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် လုံခြုံရေးကို နံပါတ်တစ်အနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ထားရမယ်။ သတင်းမှားတွေ ပေးရမယ်။ ဗယ်ခြောက်ညာလှမ်းတွေ လုပ်ရမယ်။ နယ်မြေကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ရမယ်။ ကဲ- အခု ညီမလေး မန္တလေးမှာ ကျောင်းသွားတက်တယ်နော်။ ညီမလေး နေတဲ့ ရပ်ကွက်ကို ညီမလေး လေ့လာထားဖို့လိုမယ်။ပြီးတော့ မြို့အနှံ့။ ပြီးရင် မြို့ဝန်းကျင်။ ကားလမ်းခရီး၊ ကားဂိတ်တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေ။ ဒီတခေါက်ပြန်ရင် ညီမလေး နယ်မြေကျွမ်းအောင် လေ့လာကြည့်ကြည့်ပါ လား။ ဒါတွေကမြို့ပြသူပုန်တယောက်အတွက် အရေးကြီးတယ်။ သူပုန်တယောက်ဟာ ကိုယ်လှုပ်ရှားမယ့် နယ်မြေရဲ့ ၀င်လမ်း၊ ထွက်လမ်းတွေ၊ ရဲတွေ ရှိတတ်တဲ့ နေရာတွေ၊ မီးပွိုင့်တွေ၊ လူဝင်လူထွက် နည်းတဲ့အချိန်၊ များတဲ့ အချိန်၊ တယ်လီဖုန်း ရှိတဲ့ နေရာတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ၊ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို သိနေရမယ်။ ရှောင်ဖို့ လိုတဲ့အခါ ငွေအင်အားရှိရင် လမ်းမတူတဲ့ ကားလမ်းခရီးတွေကို အချိန်တွေ ခွဲဝယ်ပြီး ရန်သူကို ပြန်လှည့်စားဖို့ လိုမယ်။ ရှောင်မယ့် အချိန်ကာလအတွက် နာမည်မတူတဲ့ နောက်ထပ် ကျောင်းသားကတ်ဖြစ်ဖြစ် တခုခု ကိုင်ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဒီအချက်က သတင်းအချက်အလက်နဲ့လဲ ပိုပြီး ဆိုင်လိမ့်မယ်။ ရန်သူကို သတင်းအချက်အလက်မှားတွေ ပေးပြီး အချိန်ဖြုန်းပေးဖို့လိုတယ်။ ရန်သူက ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာကို မသိစေဖို့ အထူးလျှို့ဝှက် ထားရမယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်သူအကြောင်းကိုတော့ ကိုယ်က သိနေအောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ ၀န်းကျင်က ရန်သူ့လူတွေကို ခွဲခြားသိနေနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ သူတို့ခြေလှမ်းတွေကို သိနိုင်တယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ အချိန်အခါနဲ့ အညီ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ စီမံချက်တွေက ကောင်းနေပါစေ၊ လုပ်မယ့်လူရဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်မှု မကောင်းရင် ကြန့်ကြာ မှုတွေ၊စီမံချက်ပျက်သွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ညီမလေး”
“ဒါကတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ အခြေအနေ၊ နယ်မြေ၊ တာဝန်အကြီးအငယ်၊ အမာလိုင်း၊ အပျော့လိုင်းအရ ကွာမှာပဲ။ တပ်အပ်ပြောလို့တော့ မရဘူး။ လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတွေမှာ ကတော့ အများစုကလက်နက်ကိုင်တာဆိုတော့ ချေမှုန်းရေး လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒီလို ချေမှုန်းတာမှာ ပစ်မှတ်နေရာတွေကတော့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရုံးဌာနတွေ၊ ရဲစခန်း၊ ယာဉ်တန်း၊ ရဲကား၊ စစ်ကား စတာတွေပဲ။ နောက်ထပ်တမျိုးကတော့ အချိန်အတိုင်း အတာတခုအထိ ၀င်ပြီး စီးနင်းတာပဲ။ ညဘက်ဆိုရင်တော့ ပိုထိရောက်တယ်။ အစောင့် အရှောက်နည်းတဲ့ ရုံးတွေကို ညဘက် ၀င်စီးနင်း၊ လျှို့ဝှက်စာတမ်းတွေယူ၊ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမလိုတဲ့ ဖိုင်တွေဆို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့။ နောက်တမျိုးကတော့ လူထုတိုက် ပွဲတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ တချို့နေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ထားတာပဲ။ ဥပမာ- စက်ရုံ၊ ကျောင်းဝင်း စတာမျိုးတွေ။ အဲဒီမှာ အရေးကြီးတာက သပိတ်စခန်းနားကို အာဏာရှင် ဒေါက်တိုင်တွေ အလွယ်တကူ မကပ်နိုင်အောင် အရံအတားတွေ လုပ်တာမျိုးပဲ။ ရန်သူ့ယာဉ်တန်းကို သပိတ် စခန်းတွေဆီ မရောက်ခင် ဖြတ်တိုက်တာတွေ၊ ရန်သူ့ဒေါက်တိုင်တွေ စုတတ်တဲ့ နေရာတွေကို ကြိုတင်ပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ် အစုအဖွဲ့လေးတွေက သူ့နယ်နဲ့သူ ရန်သူ့ဒေါက်တိုင်ဖြိုဖျက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့။ ဒါတွေကတော့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ အကြမ်းမဖက် လူထုတိုက်ပွဲပဲ လုပ်မှာလား၊ လူထု တိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ပေါင်းစပ်တိုက်ပွဲဝင်မှာလား ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ တော်လှန်ရေးတခုမှာ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန် အပေါ် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာက သားသမီးကို ဘာအ၀တ်ဝတ် ပေးမလဲ ဆိုတဲ့ မိဘနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတူပဲ။ ကိုယ့်သားသမီး အရွယ်အစားနဲ့ အခြေအနေကို သိပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တော့ အမြင်သင့်တော်ပြီး အောင်မြင် မှာပေါ့။ မရွေးချယ်နိုင်ရင်တော့လဲ ကိုယ့်သားသမီးကို အကျီင်္နီလေး ၀တ်ပေးပြီး နွားသိုးရှေ့ ခေါ်သွားတဲ့ မိဘလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါကတော့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အတွေး အခေါ်တွေ အပေါ်မှာပဲ မူတည်တာမို့ အစ်ကို သိပ်မပြောတော့ဘူး။ ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေပြွန်ဖို့ကတော့ မြို့ပြသူပုန် တယောက်အတွက် အရေးကြီး ဆုံးပဲ”
“ညီမလေး တခုမေးမယ်နော် အစ်ကို။ လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ လူတွေအများကြီး လမ်း ပေါ်ထွက်လာမှာပဲ။ လူထုစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့ပြီး ချီတက်ဆန္ဒပြမှာပဲ။ အဲဒီမှာ လူထုနဲ့ စစ်တပ်၊ ရဲတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ရန်သူက လူစုခွဲခိုင်းမယ်။ ကိုယ့်ဘက်က မခွဲဘူး။ တရားဟောတာတွေ ဘာတွေလုပ်မယ်။ ပစ်တော့မှ ပြေးမယ်။ တနေရာမှာ ပြန်စုမယ်။ အဲလိုမျိုးပဲလား”
“ညီမလေးကို ခုနတုန်းက အစ်ကို ပြောသလိုပဲ။ ဒီကိစ္စက လူထုတိုက်ပွဲကို အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြတဲ့ အနေနဲ့ပဲ လုပ်မှာလား။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်မှာလား ဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဥပမာ- ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတုန်းကတော့ လူထုအင်အားကိုပဲ လုံးဝ သုံးသွားတယ်။ သံချပ်ကာကားတွေ ပင်မ သပိတ်စခန်းကို ချီတက်လာတဲ့အခါမှာ လူတွေက လမ်းမဖယ်ပေးပဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး သံချပ်ကာကားတွေ ဆုပ်သွား တယ်။ ဒါကအကြမ်းဖက်မှု လုံးဝမပါပဲ လူထုအင်အားတခုတည်းပဲ သုံးခဲ့တဲ့ပွဲ။ ဘရာဇီးတုန်းကတော့ ဘရာဇီးကျောင်းသားတွေက ပြန်ပြီး ခုခံခဲ့ကြတယ်။ ရဲတွေက ရှေ့တိုးလာပြီး ဆန္ဒပြ သမားတွေထဲက ခေါင်းဆောင်လို့ ယူဆသူတွေ၊ အလံကိုင်တွေ၊ ရှေ့တန်းက လူတွေကို ၀င်ဆွဲဖမ်းတဲ့အခါ လူအုပ်က ငြိမ်မနေဘူး။ တိုးလာတဲ့ ရဲတွေကို လူအုပ်ထဲ ကျွံဝင်လာအောင် လုပ်ပြီးမှ ပြန်ဝိုင်းလိုက်ကြတယ်။ တဘက်မှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတုန်း၊ အရေးပါတဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေကို ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ ရဲတွေ နေရာယူတတ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေကို ကြိုပြီး ခန့်မှန်းတာ၊ သတင်းရယူတာတွေ လုပ်ထားလို့ရတယ်။ အဲဒီအခါ ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းက ရှေ့နောက်ပိတ်ပြီး ပြန်ဝိုင်းတာမျိုး ဖန်တီးလို့ ရတယ်။ နီးစပ်ရာ အဆောက် အဦးတွေကနေ နေရာကြိုယူုပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်လို့ရတယ်။ နောက်တခု အရေးကြီးဆုံးက လူထု အစည်းအဝေးတွေ လုပ်တဲ့အခါ escape plan ရှိဖို့ပဲ။ ဒါတွေ မရှိပဲ ဘယ်တော့မှ လူထု အစည်းအဝေးတွေ မခေါ်ရဘူး။ ချီတက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ထောင်ချောက် ဆင်ခံရနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ အာဏာရှင် လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ စုဝေး ထားနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ စစ်ကြောင်းတွေ လွှတ်သင့်တယ်။ မလွှတ်ခင် ကတည်းက စစ်ကြောင်းချီတက်ရာ လမ်းတလျှောက်က အားနည်းချက်ရှိနေနိုင်တဲ့ နေရာ တွေကို ကိုယ့်ရှေ့ပြေးတွေ ကြိုလွှတ်ထားသင့်တယ်။ ဒီလို လူထုနဲ့ တွဲပြီး လူထုတိုက်ပွဲထဲမှာ ပါတဲ့ မြို့ပြသူပုန်ကို လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကတော့ မြို့ပြဆန္ဒပြသူပုန်လိုခေါ်ကြ တယ်”
“ဟိုနေ့က အစ်ကိုပြောတဲ့ မြို့ပြဆန္ဒပြ သူပုန်အကြောင်းလေး ဆက်ပါဦးအစ်ကို”
“ မြို့ပြဆန္ဒပြသူပုန်ဆိုတာက လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဖော်ဆောင်တဲ့ မြို့ပြသူပုန်ပေါ့။ အစ်ကိုက ဒါ ကြောင့် ညီမလေးကို ပြောတာလေ။ သူပုန်လုပ်ချင်တယ် ပြောမနေနဲ့။ ညီမလေး ကိုယ်တိုင် ကိုက သူပုန်ဖြစ်နေပြီးသား ဆိုတာ။ အဲဒါကို ပြောတာ။ လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင် တာ၊ လှုံ့ဆော်တာ၊ တည်ဆောက်တာ၊ အစုအဖွဲ့သမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့စည်းတာတွေ အားလုံးဟာ မြို့ပြဆန္ဒပြသူပုန်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပဲ။ အာဏာရှင်တွေကလဲ ဒါကို သိပ်ကြောက် ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကြီးမားကျယ်ပြန်တဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတွေဟာ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်လို့ပဲ။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ရပ်တန့်တာနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ တယောက်က တယောက် ပြောင်းသွားတာ မတူဘူး။ အစ်ကိုတို့ ရှစ်လေးလုံးတုန်းက လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ တယောက်က တယောက် ပြောင်းသွားအောင်တော့ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ရုံးဌာနတွေ တော်တော်များများ သပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ အသက်ဝင်နေမှုကို မရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားသစ်တခုနဲ့ အစားထိုးပြီး တည် ဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုအစားမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အာဏာပြန်သိမ်းခံခဲ့ရတာပဲ”
“ညီမလေးက အဲလိုမသိထားခဲ့ဘူး။ အစိုးရသုံးခုပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့ လူပြောသူပြောတာတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပဲသိထားခဲ့တာ”
“မအောင်မြင်လို့ပဲ ခုညီမလေးတို့၊ အစ်ကိုတို့ ဆက်တိုက်နေရတာပေါ့ ညီမလေးရဲ့။ တော်လှန်ရေး လုပ်တဲ့အခါ အဲဒီ တ၀က်တပျက် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန် နှစ်သိမ့်ပြီး သာယာမှုတွေကို ရှောင်နိုင်ရမယ်။ ဒီအချက်က တော်တော် အရေးကြီးတယ်။ ဥပမာ- ဆယ်တန်းကျတဲ့လူက ထုတ်ထားတဲ့ အမှတ်စာရင်းကြည့်ပြီး သူဂုဏ်ထူးသုံးခု ရပါတယ်လို့ ကြည်နူးဝမ်းသာ နေသလိုနဲ့ တူတယ်။ အမှတ်စာရင်းအရ ဂုဏ်ထူးသုံးခုပါ နေပေမယ့် ခြောက်ဘာသာလုံး မအောင်တော့ ကျတာက ကျတာပဲလေ။ အဲဒီပကတိ အမှန်ကို သိပြီး၊ ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ကို ပြန်ရှာနိုင်ဖို့ပဲ။ မဟုတ်ရင် အထည်ကြီးပျက်စိတ် တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ တချိန်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ရတာကို အရသာခံ စိတ်ကူးယဉ်နေလို့ ဘာမှ မထူးဘူး။ လက်ရှိ မိုးရေထဲမှာ ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်နေရတဲ့ဘ၀ကနေ ဘယ်လို တိုးတက် အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကပကတိအခြေအနေရဲ့လိုအပ်ချက်တရပ်ပဲ”
“အစ်ကို ပြောလိုက်တော့မှပဲ ညီမလေး သဘောပေါက်သွားတော့တယ်။ ပကတိအခြေ အနေကို သဘောပေါက် လက်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာ။ ဒီစကားက တော်လှန်ရေးအတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ဘ၀အတွက်လဲ အရေးကြီးတဲ့ စကားတရပ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ညီမလေး တသက်လုံးမှတ်ထားမယ်အစ်ကို”
“အရေးကြီးတယ် ညီမလေး။ လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တော်လှန်ရေးတရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက် ဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် ပကတိအခြေအနေကို သိနေဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ။မြို့ပြသူပုန်တွေ၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေ အတွက်ကတော့ ဒီအချက်ဟာ ကိုယ့်အသက်၊ ကိုယ့်ဘ၀၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရဲဘော်တွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေနဲ့ပါ ရင်းရလောက်တဲ့အထိ အရေးကြီးတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ပကတိအခြေအနေကို နားလည်ရတယ် ညီမလေး။ ငါဘာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပြန်မေးရမယ်။ မြို့ပြသူပုန်လား၊ တော်လှန်ရေးသမား လား၊ စာနယ်ဇင်းသမားလား၊ မြေအောက်ရဲဘော်လား၊ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိဖို့ လိုတယ်။ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပြီး ဖိနှိပ်တဲ့ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေတဲ့ တော်လှန်ရေး သမားတယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုကြောင့် ကိုယ့်ရဲဘော်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခမရောက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး စောင့်ထိန်းနိုင်ရမယ်။ စကားသိပ်များတဲ့ လူတွေ ကိုယ့်ကလာဘ်စည်းထဲ ရောက်လာရင် သတိသာ ထားပေတော့။ လျှို့ဝှက်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာ အစည်းအဝေးတွေ၊ စည်းရုံးရေးတွေ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ်နေရသူတွေကို သီးခြားခွဲ ပြီး တာဝန်တွေ ပေးသင့်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူ့စိတ်ဆိုတာက ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်တတ်လို့ပဲ။ တခါတရံမှာ ရန်ဖြစ်ငြင်းခုံမှုတွေ ရှိလာတဲ့အခါ လူတွေက သူဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ ဆိုတာ ဇာတိပြချင်ကြတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ငါဘာလဲဆိုတာ ပြနိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက် လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ချပြောပြီး ကြွားတတ်ကြတယ်။ လူတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို သိချင်ရင် စိတ်ရှုတ်ထွေးအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်၊ ရန်ဖြစ် ငြင်းခုံကြည့်လိုက်။ သေချာပေါက်ထွက်လာတယ်”
“ဟုတ်တယ်အစ်ကို။ အဲဒါတော့ အသေအချာပဲ။ ညီမလေး အဲဒါမျိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ဖူးတယ်။ တခါတလေလဲ အရက်ဝိုင်းမှာ မခံချင်အောင် ဆွပြောပြီးမှ သတင်းနှိုက်ယူတာမျိုးလဲရှိတယ်တဲ့”
“အမှန်ပဲ ညီမလေးရ။ အရက်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ သိက္ခာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဖရိုဖရဲဖြစ်စေတယ်။ အရက်ဝိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးမှ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငြင်း ခုန်ပြီးပဲ အဆုံးသတ်မှာပဲ။ မြေပေါ်နိုင်င့ရေးသမားတွေအတွက်တော့ အရမ်းကြီးမားတဲ့ ပြဿ နာမရှိပေမယ့် မြေအောက်ရဲဘော်တွေနဲ့ မြို့ပြသူပုန်တွေအတွက်တော့ ဒီကိစ္စဟာ အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အရမ်းမရင်းနှီးသူတယောက်နဲ့ အတူတူ မသောက်စားမိဖို့ ရှောင်သင့်တယ်။ သောက်စားတာတင် မဟုတ်ဘူး။ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးတာတွေ၊ စကားအများ ကြီးပြောရတာတွေကိုပါမလိုအပ်ရင်ရှောင်နေသင့်တယ်”
“မြေအောက်ရဲဘော်တွေ၊ မြို့ပြသူပုန်တွေအတွက်က စည်းရုံးရေးနဲ့ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရေး တာဝန်တွေ ယူထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ လူချင်း မဆုံပဲ အလုပ်လုပ် နိုင်ရင်တောင် ပိုကောင်းတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် လူချင်းမတွေ့ပဲ လုပ်လို့ ရနေတာတွေ အများကြီးပါ ညီမလေးရယ်။ အစည်းအဝေးဆိုတာ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်အဖွဲ့တဖွဲ့လုံး ရန်သူက ရိပ်မိပြီး ထောင်ချောက်ထဲ ရောက်သွားနိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင်လဲ ဘယ်သူတွေဆိုတာ ရန်သူက သိသွားပြီး နောက်ယောက်ခံ လိုက်ခံရတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့က နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကို အစည်းအဝေးလုပ်၊ ဟိုနားစုစု၊ ဒီနားစုစုလုပ်တာ၊ နိုင်ငံရေးစကားလုံး အကြီးကြီးတွေ ပြောရတာတွေလို့ ထင်နေကြတာ ညီမလေးရ။ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတော့ အထိုက်အလျောက် လိုပေမယ့် မြေအောက်နိုင်ငံရေးမှာ ဒါတွေ ပါသွားရင်တော့ ပြဿနာတွေ တက်မှာပဲ။ မြေအောက်သူပုန် တယောက်ဟာ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲပြီးရင်တောင် မလိုအပ်ပဲနဲ့ ဒါကို သူ့လက်ချက်ဆိုတာ လူသိမခံရဘူး။ မြေပေါ်နဲ့ မြေအောက်တော်လှန်ရေးမှာ ပြောင်းပြန်ယူဆရမယ့် အချက်တွေက အများကြီးပဲ။ အရေးပါတဲ့ သော့ချက်တခုကတော့ မြေအောက်တော်လှန်ရေးမှာ လူအများက ကိုယ်လုပ်နေ တာတွေကို မသိလေလေ၊ ကိုယ့်အတွက် လုပ်စရာ အခွင့်အလမ်း ပိုများလေလေပဲ။ မြေပေါ် နိုင်ငံရေးကျတော့ လူအများက ကိုယ်လုပ်နေတာကို သိလေလေ၊ ကိုယ့်ကို ၀န်းရံမယ့်လူ များလေလေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပိုအောင်မြင်လေလေပဲ။ ဒါကြောင့် မြေပေါ်နဲ့ မြေ အောက်ကို လိုင်းမပူးပါနဲ့ ဆိုတာကို မြေအောက်ယူဂျီစည်းကမ်း တခုအနေနဲ့ သတ်မှတ် ထားကြတာပေါ့”
“အဲဒီ လိုင်းမပူးဖို့ စည်းကမ်းက အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့မှာ တော်တော်ခက်တယ်နော်”
“ခက်ပေမယ့် ခံစားချက်ထက် တာဝန်ကို ဦးစားပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကိုင်စွဲပြီး လိုက်နာရမယ့် သံမဏိစည်းကမ်း တခုပဲ ညီမလေး။ အဲဒီစည်းကမ်းကို နည်းနည်းလေးပဲ စဖောက်လိုက်မိ ရင်တော့ ပြဿနာမီးပွားတွေ စတော့တာပဲ။ ယူဂျီလုပ်ငန်း ကျဆင်းရတာတွေထဲမှာ ဒီအချက် က နံပါတ် (၁)ပဲ။ မြေအောက်ရဲဘော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့ပြသူပုန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေကို အတိအကျ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒီစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေဆိုတာက ပြီးစလွယ်၊ တွေ့ကရာချထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေမဟုတ်ဘူး။ လူတွေ အများကြီးရဲ့ ဘ၀နဲ့ အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီး ပေးထားခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ။ ဒီစည်းကမ်းတွေ ထဲမှာ သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ၊ အသက်တွေ အများကြီးပဲ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေ တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်”
“မြို့ပြသူပုန် စည်းကမ်းတွေကကော အစ်ကိုတခါပြောထားတဲ့ ယူဂျီစည်းကမ်းတွေနဲ့ အတူ တူပဲလား”
“တာဝန်ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားတာလေးတွေ တချို့တော့ ရှိတာပေါ့ညီမလေး။ ဥပမာ- ချေမှုန်းရေးနဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရေးကတော့ ကွဲပြားမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် ယေဘုယျအခြေခံ အချက်တွေက တော့ အတူတူပါပဲ။ လိုင်းတွေမပူးရဘူး။ မလိုအပ် ပဲ စကားအများကြီး မပြောရဘူး။ လိပ်စာစာအုပ်တွေ၊ တယ်လီဖုန်းမှတ်တမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရမယ်။ စာရွက်စာတမ်းတွေ မသိမ်းဆည်းထား ရဘူး။ လူနာမည်တွေ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေ၊ လိပ်စာတွေ၊ မြေပုံကြမ်းတွေ၊ စီမံချက်တွေကို ဦးနှောက်ထဲ စွဲနေအောင် မှတ်ပြီးတာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း မှန်သမျှ ဖျက်ဆီးပစ် လိုက်ရမယ်။ ဒါတွေက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတာတွေကတော့ ရှောင်ရန် အချက် (၇) ချက်ပဲ။ ပထမ တချက်က ရန်သူကို အထင်သေးတာ။ လျှော့တွက်တာ၊ လုပ်သမျှအားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပြီး ပေါ့ဆတာတွေပဲ။ ရန်သူရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတာက အချိန်တွေ၊ ငွေတွေနဲ့ ရင်းပြီး စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးခံထားရတာ။ ဒါကို အထင် ကြီးနေရင်လဲ ကိုယ့်ဘက်က တွန့်ဆုတ်တတ်တယ်။ အထင်သေးပြန်ရင်လဲ ကိုယ့်ဘက်က ပေါ့ဆတတ်တယ်။ ဒီတော့ အထင်လဲ ကြီးစရာ မလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် အထင်သေးလို့လဲ မရဘူး။ သဲလွန်စ ဘယ်တော့မှ မကျန်စေနဲ့။ ဒါကို အထူး သတိထားရမယ်။ ဒုတိယ အချက် ကတော့ ကြွားတာ။ မြို့ပြသူပုန်ဆိုတာ မြေအောက်တော်လှန်ရေး အသွင်နဲ့ လှုပ်ရှားသူတွေ ဖြစ်တယ်။ အစ်ကိုပြောသလိုပဲ။ ကိုယ်တကယ် ဘာတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ လုတွေ မသိလေ၊ ကိုယ့်အတွက် လုပ်စရာ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုများနေလေလေပဲ။ ဒီအချက်ကို မလိုက်နာပဲ ကိုယ့်ကို လူအထင်ကြီးတာ ခံစေချင်လွန်းလို့ ကိုယ်ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ လိုက်ကြွားတာ ဟာ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ မသိနားမလည်သူတွေကတော့ အထင်ကြီးချင်ကြီး လိမ့်မယ်။ မြေအောက်တော်လှန်ရေးကို နားလည်နေ သူတွေကတော့ အဲလိုလူနဲ့ အလုပ် လုပ်ဖို့ကို တစတစနဲ့ ရှောင်လာကြမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလိုလူမျိုးဟာ သူ့ကိုယ် သူသာမက သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတွေကိုပါ ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်လို့ပဲ။ တတိယ ရှောင်ရမယ့် အချက်ကတော့ တပ်ဦးကျွံတာပဲ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ လူတဦး တယောက်တည်း၊ တဖွဲ့ တည်းနဲ့ လုပ်လို့ မရဘူး။ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံး စုပေါင်းလုပ်မှသာ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်တယ်။ လူထုရဲ့ ရေချိန်၊ တော်လှန်ရေးရဲ့ ပကတိအခြေအနေစတာတွေကို စနစ်တကျ တွက်ချက်လုပ်ရတယ်။ ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုတဲ့ တော်လှန်ရေး ခေါင်း ဆောင်တယောက်၊ အစုအဖွဲ့တခု စတာတွေဟာ သူအောင်မြင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို အများနဲ့ မညှိနှိုင်းပဲ တွန်းလုပ်တတ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အခြေအနေနဲ့အညီ ချိန်ကိုက်မထွက်လာပဲ ကျွံထွက်သွားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်လာပြီး၊ ရန်သူကို သွားဆွပေးလိုက်သလို ဖြစ်လာတာပဲ။ ရန်သူက တကယ်စစ်ဆင်လာတဲ့ အခါ ကျတော့ ပြင်ဆင်ပြီးသား မဖြစ်တဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးတခုလုံး ချေမှုန်းခံရတတ်တယ်။ စတုတ္ထအချက်ကတော့ ကိုယ့်အင်အားတွေကို ရှိတာထက် ပိုပြီး မြင်တာပဲ။ အဲဒီလို မြင်လာတဲ့ အခါ ရှိတဲ့ လူအင်အား၊ ငွေအင်အားထက် အဆမတန် ပိုပြီး သာလွန်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာကြီးတွေကို လုပ်မိတတ်တယ်။ ပဉ္စမအချက်ကတော့ ကောက်ခါငင်ခါ စိတ်လိုက် မာန်ပါ တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာပဲ။ လူဆိုတာက ရန်သွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်လိုက်မာန်ပါ သွားဖြစ်ရင် ကိုယ်ပဲနာမှာ အသေအချာပဲ။ စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်အခါ၊ အခွင့်အလမ်းကို မစောင့်နိုင်ပဲ စိတ်မရှည်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်သူကို အလျင်အမြန် ထိပ်တိုက်သွားရင်ဆိုင် မိတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီမလေးကို အစ်ကို သတိထပ်ပေးမယ်နော်။ သူသေကိုယ်သေ သွားချလိုက်ချင်တယ်တို့၊ စိတ်မရှည်တော့ဘူး တို့ ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ညီမလေးဆီကနေ အစ်ကို ခဏခဏ ကြားရတယ်။ တော်လှန်ရေးသမားကောင်းဆိုတာ အချိန်အခါ၊ အခွင့်အလမ်းကို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စောင့်နိုင်ရတယ်ညီမလေး။ မိုက်ရူးရဲ မဆန်ရဘူး။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချလိုက်တာနဲ့အန္တရာယ်တွေ့တော့မယ်ဆိုတာကိုညီမလေးအမြဲတွဲတွေးရမယ်နော်”
သူမ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ခေါင်းညိတ်လိုက်မိသည်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဖြစ်တတ်သော သူမရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားရပါဦးမည်။
“နောက်တချက်ကလဲ ခုနတုန်းက အချက်နဲ့ ဆက်စပ်တယ်။ ရန်သူကို ဒေါသအရမ်း ထွက်နေချိန်မှာ သွားတိုက်ခိုက်တာ။ လူတိုင်းဟာ ဒေါသထွက်နေချိန်ဆို အမှားတွေ လုပ်မိ တတ်တယ်။ ဒေါသစိတ်နဲ့ ရမ်း မိတတ်တယ်။ ရန်သူရဲ့ ဟာကွက်တွေကို မမြင်ဘူး။ ဘာအ လုပ်ပဲ လုပ်လုပ် သွေးအေးအေးနဲ့ အစီအစဉ်တကျ လုပ်တတ်သူကသာ ယမ်းပုံမီးကျ စိတ်မ ထိန်းနိုင် ပေါက်ကွဲတတ်သူတွေကို အနိုင်ယူနိုင်တယ်။ ဒေါသနဲ့ အလုပ်တခုကို လုပ်တိုင်း ကိုယ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာ မှတ်ထားလိုက်တော့။ နောက်ဆုံးတခုကတော့ အလုပ်တွေကို အစီ အစဉ်တကျ မလုပ်တာနဲ့ အလျင်စလို လုပ်တတ်တာတွေပဲ။ ဒါတွေဟာ တော်လှန်ရေး သမား တွေရဲ့ အောင်ပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မယ့် အချက်တွေပဲ။ တော်လှန်ရေး တခု အောင်မြင်မလား၊ မအောင်မြင်ဘူးလား သိချင်ရင် လူတွေကို ကြည့်လိုက်။ ဒီအချက်တွေကို ရှောင်နိုင်တဲ့လူ များနေရင် အောင်မြင်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ရန်သူကို အထင်သေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ဟုတ်ပြီလို့ ထင်နေကြရင်၊ လျှို့ဝှက်ထားအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေကို ထုတ်ဖော်ကြွားဝါနေကြရင်၊ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို မဆန်းစစ်ပဲ ဟန် ချက်မညီတဲ့ တွန်းအားတွေ ဖြာထွက်နေရင်၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာထက် ကျော်လွန်နေတဲ့ စီမံ ချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်နေကြရင်၊ ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ အလုပ် လုပ်နေကြရင် အဲဒီတော်လှန်ရေးဟာ အရှိန်နဲ့ မြောင်းထဲ ထိုးဆင်းနေပြီဆိုတာ ယူဆလို့ရ တယ်။ အဲဒီလက္ခဏာတွေ ပေါ်နေရင် ခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ပြင်သင့်တာပြင်ဖို့ လိုသလို တော်လှန်ရေးသမားတိုင်းကလဲ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ပြန်ပြီး ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒီအချက်တွေကို ညီမလေး သေချာမှတ်ထားပါ။ ရှောင်သင့်တာတွေ ရှောင်နိုင်ဖို့ ကိုအထူးကြိုးစားရမယ်နော်ညီမလေး”
“ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို။ စိတ်ချပါ။ အစ်ကို့ တပည့်မလေးပဲ ဥစ္စာ။ ဆရာ့မျက်နှာက်ို ဘယ်တော့မှ အိုးမဲမသုတ်ဘူး”
“ဆရာလုပ်လုပ်၊ မလုပ်လုပ်။ ဒီကိစ္စရေးရာတွေမှာတော့ အစ်ကိုက ညီမလေးရဲ့ ဆရာရင်းပါ။ အစ်ကိုဖတ်ခိုင်းထားတာတွေကိုလဲ ညီမလေး ညတိုင်း ဖတ်ဖြစ်တယ် သိလား။ ကျောင်းစာသာ မဖတ်ချင်နေမယ်။တခြားစာတွေတော့နေ့တိုင်းဖတ်ပြီးမှကိုအိပ်တာ”
“အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ညီမလေးရယ်။ စာမေးပွဲ မအောင်ပဲ နေပါဦးမယ်။ ညီမလေးကို အစ်ကိုက ဘွဲ့ရပညာတတ်လေး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဘွဲ့ယူတယ်ဆိုတာက အောင်လက်မှတ်ကို ယူတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ပညာကို ယူတာ။ ပညာဆိုတာက ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ ယူလို့ ရတာမှန်ပေမယ့် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာတွေက စနစ်တကျ သင်ပေးလိုက်တော့ နည်းလမ်းတကျ တတ်မြောက်လွယ်တာပေါ့။ ဆရာမပြရင် ငါးပိဖုတ်တောင် နည်းလမ်း ကျဘူးတဲ့ညီမလေးရဲ့”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီးရယ်။ ဆရာ့စကားကို မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးပိဖုတ်တာတော့ သင်ချင်ဘူးနော်။ အစ်ကို ဖုတ်ကျွေးတဲ့ ပဲပုတ်မီးကင်လေးနဲ့ ထမင်းကြော် လေးတော့စားချင်တယ်။ဗိုက်ဆာပြီအစ်ကိုရဲ့”
“တော်တော်အားကိုးရတဲ့ တပည့်နော်။ ထံနီးလုပ်ကျွေးတဲ့။ တပည့်ကျင့်ဝတ်နဲ့များ ညီပါ့။ ဆရာကတောင် ထမင်းပြန်ကြော် ကျွေးရဦးမယ်”“ဟဲဟဲ။ ဘေးကနေ ကူလုပ်ပေးမယ်နော်။ စကားလဲကူပြောပေးမယ်”
“အင်းပါဗျာ။ ခင်ဗျားလေး အသံလေး ကြားနေရရင်ပဲ တော်ပါပြီ။ ဒီညနေ ထမင်းဝိုင်း လေးကတော့မြို့ပြသူပုန်သင်တန်းဆင်းပွဲထမင်းဝိုင်းလေးပေါ့။ဟုတ်လား”
စကားလုံးလေးက ရင်ထဲသို့ တိုးဝင်သွားသည်။ ဒီတညနေ ထမင်းဝိုင်းလေးကို သူမဘယ်လို မေ့လို့ရနိုင်ပါမည်တဲ့လဲ။
ခင်မမမျိုး (၃၁၊ ၁၊ ၂၀၁၀)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 7:16 PM ,0comments